Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: 2007
Posted by Peaceful Walking at 4:19 PM 1 comments
Posted by Peaceful Walking at 4:17 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 1:24 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 4:50 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 4:48 AM0comments
ဒို့ ခေတ်ကျမှ အညံ့ခံ..လက်မြောက်အရှုံးခံမလား..
ရံပုံငွေဖြည့်..media တွနဲ့တိုက်စို့ ဟေ့...
Posted by Peaceful Walking at 5:05 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 7:29 AM0comments
တွဲလက်ခိုင်ခိုင်..အနာဂတ်ပန်းတိုင်ဆီသို့ ..ညီညီညာလာကြစို့ 
Posted by Peaceful Walking at 1:46 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 5:13 AM0comments
ကျနော်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကို နအဖ စစ်ခွေးတွေ သတ်ပြီ
“ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် စွမ်းအားရှင်တွေက သံဃာတော်တွေကို နံပါတ်ဒုတ်နဲ့ နားထင်ကို ပစ်ရိုက် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ သံဃာတပါးဟာ အထိနာပြီးတော့ ဆေးရုံ တင်လိုက်ရပါတယ်။ နောက် အဲဒီ သံဃာဟာ ပြန်လွန်တော်မူ သွားပါတယ်။ အဲဒီ သံဃာ ပြန်လွန်တော်မူ သွားတဲ့အတွက် သံဃာတော်များ ကျောင်းတိုက်ဌာန အသီးသီးမှာ ဒီသတင်း ပျံ့သွားပါတယ်။ ဘုရားရှင်၏ သားတော် သွေးနီ ကျခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ငတ်ပြတ်မှု ပြဿနာဒါဏ်၊ ငတ်တာကို ငတ်တယ်လို့ ရိုးသား အေးချမ်းစွာ လမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြပြီးတော့ ရိုးသားစွာ တောင်းဆိုတာကို ဒီလိုမျိုး နားထင်ကို နံပါတ်ဒုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်တဲ့အတွက် တတိုင်းပြည်လုံး ခံစားရပါတယ်။ သံဃာတော်များကလည်း ခံစားရပြီး အားလုံး ဒီသဘောတရားကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဒီအစိုးရကို ဘယ်လို တရားချမလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးရင်း သံဃာတော်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို ပွက်လောရိုက် နေပါတယ်။”
“ပြည်သူတွေကတော့ ဒကာကြီး၊ မနေ့က ကိစ္စမှာ သံဃာတွေက ငြိမ်းငြမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဒါမြို့ကို ပတ်ပြီးတော့ မေတ္တာပို့၊ ပရိတ်ရွတ်တာပဲ။ မနေ့တုံးက သံဃာတွေက အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမှ ဘယ်သူ ဘာဆိုတာမျိုး၊ သံဃာတွေက ဆန္ဒပြတာ တဲ့ အနေလဲ မဟုတ်ဘူး။ တကာကြီးတို့လဲ လက်တွေ့ ခံစားနေရတဲ့ စကားကို ပြည်သူတွေ မပြောရဲလို့၊ ဒါ သံဃာတွေက ပြည်သူကိုယ်စား ပြောပေးတဲ့ အနေနဲ့ပဲ ပုံသဏ္ဌာန်လေးပါတယ်။ လက်တွေ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ချပေးဖို့ ဒါလောက်ရယ်။ ဒီကုန်ဈေးနှုန်း ချရေးအတွက် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်တဲ့ လူတွေ ဖမ်းဆီးထားတာကို လွတ်ပေးဖို့၊ ဒါလောက်ပဲ။ သံဃာတွေရဲ့ လက်ကမ်း ပုံသဏ္ဌာန် ပါတယ်လေ။ အဲ ပြောတာဆိုတာကလဲ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ ဒို့အရေး ဘာညာ ဒီလိုအော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာပို့ကို ပို့တာပဲလေ။ အဲဒါကို ဒီဦးပဉ္စင်းတို့ ဒီအရှေ့တိုက်က အထွက် ဒီပန်းခြံ မီးပွိုင့်ဆုံ လမ်းမှာ ဒါစစ်တပ်ရော၊ ကြံ့ဖွံ့ရော၊ စွမ်းအားရှင်ရောက မတရားကိုပဲ ဟိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ သံဃာတွေ ဖမ်းတယ်၊ ရိုက်တယ်။ သံဃာကို ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ဘုန်ကြီးတပါးကို ဓါတ်တိုင်ချည်ပြီးတော့ ဟို ချည်တာလဲ ရိုးရိုးချည်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ လည်ပင်းတွေရော၊ အကုန်လုံးကိုပဲ ခွေးချည်၊ နွားချည်၊ ချည်ပြီးတော့ ပါးရိုက်တယ်၊ သေနတ်ဒင်နဲ့ ထိုးတယ် ခင်ဗျာ စဉ်စားကြည့်ပေတော့။ အဲဒါကို မြင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်လို ခံစားရမလဲဗျာ။ သူတို့က တကယ်တမ်းကျတော့ ပြည်သူတွေက ငြိမ်းငြမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဒီလို ဟိုပြည်သူရဲ့ ဆန္ဒကို သံဃာတွေက ကိုယ်စား ပို့ပေးတဲ့ ဒီဘာမှ လက်နက် မပါတဲ့ သံဃာတွေကို နှိပ်နှိပ်စက်စက် လုပ်တယ်ဆိုတော့ သံဃာတွေက ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။”
Posted by Peaceful Walking at 5:56 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 12:10 AM0comments
“မနီလာသိန်း ရှောင်နေတဲ့ နေရာကို ဝင်စစ်တော့ မနေ့ည ဆိုလို့ရှိရင် ညမိုးချုပ်တဲ့အထိ ၉နာရီ လောက်ထိ လမ်းမပေါ်မှာ လျောက်သွားနေရတယ်။ သူ့အိမ်ကို လိုက်ရှာလို့လေ သူ့အိမ်ဆိုတာ သူနေတဲ့ အိမ်မဟုတ်ဘူး။ သူရှောင်နေတဲ့ အိမ်ကိုပေါ့နော်။ နေရေးထိုင်ရေးကအစ သူတော်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ အာဏာပိုင်တွေက ဝင်ရှာတော့ နာမည်တွေမေးဖို့ နေနေသာသာ၊ သူ့ဘာသာသူတောင် အလွတ် ရုံးလာရတာ။ အခုနောက်ပိုင်း သူတို့က ပိုက်စစ်တိုက်ပြီးတော့ကို ဖြစ်နေကြတယ်။ မနေ့က သုံးခါလောက် လာစစ်တယ်။ အဲဒီ တနေရာထဲ လုံးဝ မလုံခြုံဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့အတွက်လေ။ တနှစ်ကလေးအရွယ် သမီးလေးကိုတောင် နို့ဖြတ်ထားတဲ့ အတွက် သူဖျားနေတာ။ ကလေးနို့တိုက်ချိန် မတိုက်ရတော့လေ။ ကလေးကိုလည်း သူသတိရနေတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကလေးက သတ်သတ်၊ သူက သတ်သတ် ဖြစ်နေတယ်လေ။” ဟု မနီလာသိန်း၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မဖြူဖြူသင်းက ပြောပြသည်။
“အခုလောလောဆယ် အာဏာပိုင်တွေက ဘယ်လိုပုံစံတွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတော့ ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူး။ အိမ်တွေမှာ တက်ရှာပြီး ယူနီဖောင်းလဲ မဝတ်ထားကြဘူး။ ရိုးရိုး အဝတ်အစားတွေနဲ့ဘဲ။ ကျမတို့က မေးတော့ ကျနော်တို့က တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေပါလို့ ပြောပြီးတော့ သူတို့ လုပ်နေကြတာပဲ။” ဟု သူမ က ထပ်ပြောသည်။
Posted by Peaceful Walking at 2:00 PM0comments
စစ်တွေမှာ သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြပွဲ ထပ်မံပြုလုပ် မိတ္ထီလာတွင် ဆန္ဒပြ လှည်းတန်းတွင် ဆန္ဒပြရန် စုရုံးနေပြီ
သဂုတ် ၂၉ ရက်၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်
မိတ္ထီလာ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ သိန်းလွင်၏ ပြောကြားချက်။
“မနက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ဘုန်းကြီး သံဃာ ၁ဝဝ လောက်ကို ဆွမ်းလောင်းတယ်။ အဓိက ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် ဆုတောင်းပွဲပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲပေါ့။ ကျနော့် အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ဆွမ်းလောင်း လှူတယ် ။ လောင်းလှူပြီးတော့ သူတို့ ဆန္ဒအရ ကျနော့်ကို လာပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီလိုဒီလိုပဲ သွားချင်တယ်။ ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ အေးဆေး ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ လူထု အနေထားကတော့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး ။ လူထု ပါဝင်လာဖို့ အနေအထား တခုတော့ ရမှာလည်း မဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ အန်အယ်ဒီနဲ့ တာဝန်ရှိလို့ တာဝန်ပေးယူပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလဲ လူငယ်တွေ အဖမ်းခံရတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ အဖမ်းခံရတာ ကြည့်ပြီးတော့ အဲဒီ အနေထားမှာ ကျနော်တို့ဘက် ကြည့်ပြီးတော့ ရပ်တည်ချက်တွေ ထိန်ထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ပေါ့လေ ကျနော်တို့ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ စီတန်း လှည့်လည် ကြတာပေါ့လေ။ လူ ၂ဝ လောက်ပဲ ရှိတယ်။”
အာဏာပိုင်များက ပြည်လမ်းမကြီးကို ပိတ်ပစ်ရန် လုပ်ဆောင်နေပြီဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းလမ်းဆုံတွင် ဆန္ဒပြမှု ထပ်မံ ပြုလုပ်ရန် စုရုံးရောက်ရှိမှု စတင်နေကြပြီဟု သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာ မြို့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၂ဝ ခန့်က ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
စစ်တွေဆန္ဒပြပွဲတွင် ယခုအချိန်တွင် ဆန္ဒပြသူပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော် အထိရှိသွားပြီဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။
ဝင်္ကာပါဘောလုံးကွင်းမှစတင်ပြီး ဘုန်းကြီးအပါး ၂ဝဝ က ဦးဆောင်ဆန္ဒပြရာ အရပ်သားများ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ လူ ၁ဝဝဝ ကျော်ဖြစ်သွားပြီဟု ဆိုသည်
စစ်တွေမှာ သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြပွဲ ထပ်မံပြုလုပ်
သံဃာတော် အများစု ပါဝင်သော ဆန္ဒပြသူ ၁ဝဝ ကျော်က ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီက စတင်၍ စစ်တွေတွင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ထပ်မံ ဆန္ဒပြကြသည်။ နောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းအရ ဆန္ဒပြသူများက လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ ထားလိုက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
သတင်း >>> မဇ္ဈိမ
Posted by Peaceful Walking at 5:20 PM 1 comments
Posted by Peaceful Walking at 4:12 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 7:01 PM0comments
ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်တွင် ဆန္ဒပြမည် ဆိုသော သတင်းများကြောင့် အရှေ့ဘက်မုဉ်ဦး အလယ်ပစ္စယံ အတက်မှစ၍ လုံခြုံရေးများက ဘုရားဖူးများကို ယနေ့တွင် ရှာဖွေ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။
ထို့အပြင် မုဉ်ပေါက်တိုင်းတွင် ကြိုးမဲ့စကားပြောစက်ကိုင် လုံခြုံရေး ဝတ်စုံဝတ် လူ ၅ ဦးထက်မနည်း ရှိသည်။
Posted by Peaceful Walking at 6:04 PM0comments
ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်း လမ်းဆုံတွင် လူ ၇ဝ ခန့်က လွန်ခဲ့သည့် မိနစ်ပိုင်းက စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြရာ ကြံ့ဖွံ့နှင့် စွမ်းအားရှင် ၁ဝဝ ခန့်က ဒိုင်နာကား ၃ စီးဖြင့် ရောက်လာပြီး လူ ၅ ဦးကို ဖမ်းသွားခဲ့သည်။
ဆန္ဒပြ၍ မကြာမီ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မှ ချီတက်လာသော ဆန္ဒပြသူများက လှည်းတန်းလမ်းဆုံ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ ဘက်သို့ ကွေ့ဝင်ရာတွင် အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်း >>>> မဇ္ဈိမ
Posted by Peaceful Walking at 5:38 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 3:40 PM0comments
တာဝန်သိ မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးချင်းအနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ဘို့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by Peaceful Walking at 2:40 PM 1 comments
အမိမြေအတွက်သွေးချွေးစတေး..ကျွန်တော်တို့ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားလေးများ
သိပ်လည်းမကြောက်ပါနဲ့..နအဖ
ရှေ့ တဲ့တဲ့ကမှန်အောင်ပစ်တဲ့ လက်နက်မရှိ.
မဆလ ၂၆ နှစ်..န၀တ ၁၉ နှစ်.
ကျုပ်တို့ လို ထပ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး
ကျုပ်တို့ အနင်းခံဘ၀..စတေးရင် စတေးရပစေ.
မသေမချင်း ဆက်တိုက်မဲ့ သံဓိဌာန်.
လွင့်နေဦးမဲ့ ဒေါင်းဇာတိမာန်..ဒို့ ဒေါင်းအလံ။
ဒါ ရာဇ၀တ်မှုလား.. ရီစရာ..ဟား..ဟား..ဟား
အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ ဆွဲတာ ဘယ်သူလဲ။
နိုင်ငံ နွံ့ ထဲမမြုပ်စေဖို့ 
ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေး လုပ်နေ..
Posted by Peaceful Walking at 3:41 AM0comments
ရွေ့ လျားခရီး သွားဖို့ လေ..
လူမှ လူသာ အံ့မခမ်းဂုဏ်အင်..
နေရောင်ခြည်..ကြဲကြဲနဲ့ ..ပူနွေးတဲ့ ဌာနေရေမြေ.
အမိရယ်တဲ့မှ.. ဒို့ ဗမာပြည်
ရွှေမြေရဲ့ အပေါ် အကြင်နာခေါင်းပါး..
သားအရင်း ကို..အမှိုက်တောင်းတဲ့စွန့် .
သွေးမရင်းတာတွေ..ကို ၀မ်ဝမ်စွေ့ နဲ့ ..အစာခွန့် 
သေပြန်ပါလည်း..သဂ်ြင်္ င်္ိုလ် ခက်
ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်လမ်းလျှောက်ရဲသော က်ိုမင်းကိုနိ်ုင်နှင့် မြန်မာပြည်သူများသို့..(လေးစားပါတယ်မောင်လေးရေ.အမြဲဂုဏ်ယူနေပါတယ်)
Posted by Peaceful Walking at 3:17 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 1:24 PM 1 comments
ရှေ့ သို့ ရဲရဲချီတက်.ဒို့ လင်းလက်မဲ့အနာဂတ်အတွက်..
ဒို့ တတွေဟာ လူသား
တော်လှန်ရဲစို့တူတူညီ.
သွေးနဲ့ အသက်..ပေးလျှက်ထားစေ..ဒို့ ည်ီစေ။
တဗိုလ်ကျ တဗိုလ်တက်..ရှေ့ ဆက်တက်မဲ့ခြေလှမ်းများ..
အမိမြေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးသို့ 
အနာဂတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ 
ဒို့ ပန်းတိုင်သို့ ဆက်သွားကြရအောင်။
Posted by Peaceful Walking at 6:40 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 11:55 PM 1 comments
ငါတို့ မျက်လုံးတွေ မကန်းသွားဖို့...
ငါတို့ ဘ၀တွေ သုညက ပြန်စဖို့...
ငါတို့ ဦးနှောက်တွေ မပြုန်းတီးစေဖို့...
ငါတို့ ဒဏ်ရာတွေ သက်သာစေဖို့...
ငါတို့ နားတွေထိုင်း မသွားဖို့....
ငါတို့ အကြောက်တရားတွေ မောင်းထုတ်ပစ်ဖို့...
ငါတို့ သွေးတွေအေးခဲ မသွားဖို့...
ငါတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မသေဆုံးဖို့...
ငါတို့အရှုံးမပေးဘူး သက်ပြင်းမချဘူး ဆိုတာပြဖို့...
ငါတို့ အခွင့်အရေးတွေ မရအရယူဖို့...
ပြောမရ ဆိုမရ ရင်တော့
တံခါးတွေကို ရိုက်ချိုးပစ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
(မှတ်ချက်၊ ၊ တံခါးဆိုသည်မှာ ပိတ်ရန်သာမဟုတ်၊ ဖွင့်ရန်လည်းလိုသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။)
"The Locked Doors"
We are here not to blind our eyes ..
We are here to start anew our lives..
We are here not to waste our brains..
We are here to ease our pains..
We are here not to block our ears..
We are here to drive our fears..
We are here not to freeze our blood..
We are here to escape from (death of our hopes)..
We are here not to give up and sigh..
We are here to fight for our rights..
Open these doors..
O, don't blame on us,
As you are ignorant.
Only thing to do is to break the doors.
Nyi Min Naing
(Remark: Be reminded that the doors are not only used to close but also used to open)
Posted by Peaceful Walking at 11:37 PM0comments
ကာတွန်း >> မဇ္ဈိမ
Posted by Peaceful Walking at 10:57 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 10:34 PM0comments
ကာတွန်း >>> ဧရာဝတီ အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း
Posted by Peaceful Walking at 10:16 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 8:19 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 8:09 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 7:26 PM0comments
ဧရာဝတီ | သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၀၇
နေ့လယ် ၂ နာရီခန့်က မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသမား ၁၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြရန်စီစဉ်နေခိုက် ၂၀ ခန့်ကို ရဲ၊ ကြံ့ဖွံ့များက အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးကြောင်း ဆန္ဒပြအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် မမျိုးမျိုးက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
“ဘာမှတောင်သိပ်မလုပ်လိုက်ရဘူး၊ သူတို့ဘက်က (အာဏာပိုင်) လူတွေရောက်လာပြီး ၀ိုင်းထားလိုက်တာ။ အဖမ်းခံရသူ အများစုက အမျိုးသမီးတွေ” ဟု မမျိုးမျိုးကပြောသည်။
ဆန္ဒပြသမားများအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်ကားသည် မြို့တော်ခန်းမအတွင်းသို့ မောင်းဝင်သွားကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးသူများတွင် အမျိုးသမီးများလည်းပါသည်ဟု မမျိုးမျိုးကပြောသည်
နံနက်ပိုင်းက ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၌ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ကိုအောင်စောဦး၊ ကိုစောလွင်၊ ကိုသိန်းအောင်မြင့်နှင့် ကိုညွန့်ဝင်းတို့ လိုင်းကားဂိတ်တွင်ကားစောင့်နေစဉ် ဒေသအာဏာပိုင်တို့က အကြောင်းပြချက် တစုံတရာမပေးဘဲ ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်သိန်းက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
အဖမ်းခံရသူ ၄ ဦးကို မည့်သည့်နေရာ၌ ချုပ်နှောင်ထားသည်ကို စုံစမ်း၍မရသေးပေ။
Posted by Peaceful Walking at 6:50 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 6:45 PM0comments
ကိုထင်ကျော် က မဇ္ဈိမ သို့ ပြောကြားချက်
“ကျနော်တို့က ဆက်တိုက် လုပ်သွားမှာပဲ။ ဒီနေ့ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ တခြားပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ဘာသာ သူတို့ကတော့ တက်လာကြတာပဲ၊ ကျနော်တို့ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာကတော့ လုပ်စရာရှိရင် ဆက်လုပ်မှာပဲ။”
Posted by Peaceful Walking at 6:34 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 6:00 PM0comments
နံနက် ၉ နာရီခန့်က ပုသိမ်မြို့ ကုန်သည်လမ်းတွင် တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူ ဦးအေးဝင်းက “ဓာတ်ဆီဈေးအတက် ပြည်သူအခက်” ဟူသည့်စာတန်းကို လည်တွင်စွဲထားပြီး ၁၀ မိနစ်ကြာသည်အထိ ဆန္ဒပြပြီးချိန်၌ အာဏာပိုင်တို့က ဖမ်းဆီးသွားသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လောင်စာဆီနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲအားအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရန် ကြံ့ဖွံ့နှင့် စွမ်းအားရှင် ၁၀၀ ခန့် ဒိုင်နာကား ၅ စီးဖြင့် တာမွေပလာဇာသို့ ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
နေ့လယ်တနာရီတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့နှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များဦးဆောင်၍ လူထုလူတန်းစား အသီးသီးနှင့်အတူ တာမွေပလာဇာတွင် ဆန္ဒပြရန်စီစဉ်ထားသည်ဟု သတင်းများထွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
လူ ၂၀ ကျော်ပါသည့် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြအဖွဲ့သည် မြို့နယ်မယကရုံးတွင် လောင်စာဆီဈေးနှင့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထား ကြီးမြင့်မှု ပြဿနာကို မယက ဥက္ကဌနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ ၎င်းရုံးမှနေ၍ တမိုင်အကွာခရီးကို တနာရီခန့် ကြာအောင် ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြသည်ဟု ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သည့် ရေနံချောင်း အန်အယ်လ်ဒီ စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းအောင်က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ဦးသန်းအောင်က “မယက ဥက္ကဌက ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေ တက်သွားပေမယ့် ကားခတွေကို ဆီဈေးမတက်ခင်ကအတိုင်း ပြန်ချပေးထားတယ်၊ နဂိုဈေးနှုန်းတွေအတိုင်း ဆက်သွားပါမယ်လို့ ရှင်းပြလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ပြန်ပြောတာက ဒါကို ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဥက္ကဌက လိုက်လျောသလိုပဲ နအဖ ဥက္ကဌကြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း တပြည်လုံးအတွက် လိုက်လျောပေးဖို့ ထပ်ပြောခဲ့တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
မယကရုံးအတွင်း၌ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များ အသင့်ခေါ်ထားသော်လည်း အနှောင့်အယှက်မရှိကြောင်း၊ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတလျှောက်တွင် ဒေသခံပြည်သူများက အားပေးထောက်ခံကြောင်းလည်း ဦးသန်းအောင်က ပြောသည်။
ယမန်နေ့ညနေက ရေနံချောင်း အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ဦးတင့်လွင်နှင့် ဒေါ်ခင်စောဌေးတို့အား နံနက်ပိုင်း လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဌက မယကရုံးတွင်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ ၂/၈၈ ဥပဒေအရ လူငါးယောက်ထက် စုဝေးခွင့်မရှိဟုပြောကြောင်း ဦးတင့်လွင်က ပြောသည်။
ဧရာဝတီ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းမှ ဖြစ်ပါတယ်
Posted by Peaceful Walking at 5:44 PM0comments
ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရအာဘော် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဆောင်းပါးရှင် ကျော်မင်းလူ (ရွှေပြည်သာ)က လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ရာမှ ဆန္ဒပြမှုများကို တုံ့ပြန် ရေးသားရာတွင် အစိုးရ အနေဖြင့် ဆက်လက် အရှုံးခံ ရောင်းချပေးနေရကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူသည် မိဘနှင့် သားသမီးများ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် အုပ်စုများက မိဘနှင့် သားသမီးများအကြား ရန်တိုက် ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။
“နိုင်ငံတော် အစိုးရဆိုတာ မိဘ၊ ကျွန်တော်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူတွေကတော့ သားသမီးတွေ ဆိုပါတော့။ ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘယ်မိဘမှ ကိုယ့်သားသမီး ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တာ မြင်ချင် တွေ့ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။” ဟု ရေးသားထားသည်။
ပြည်တွင်း ဆန္ဒပြသူများနှင့် သဘောထားတူညီကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် ကိုရီးယား နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများက သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆိုးလ်ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်နေကြသည်။
Posted by Peaceful Walking at 5:33 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 5:25 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 4:01 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 8:10 PM 1 comments
Posted by Peaceful Walking at 8:00 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 6:19 PM0comments
MScholar: ရုရှ မှာ စာသင်နေတဲ့ကောင်တွေ ထဟောင်တာ.....
25 Aug 07, 00:06
MScholar: မင်းကျန်စစ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး....မင်းခွေးစစ် ပါကွာ.....
24 Aug 07, 22:42
JulyDream: Sorry. for duplication msg.
24 Aug 07, 22:41
JulyDream: ဆန်ဒပြတဲ့သူတွေကို အမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့ထားတယ်လို့ ချန်နယ်နယူးအေးရှားမှ ခေါင်းကြီးပိုင်း သတင်းအနေနဲ့ ကြေညာသွားပါတယ်။ ကိုထင်ကျော် ပါမပါတော့ မသိပါဘူး။
24 Aug 07, 22:40
24 Aug 07, 22:31
စိတ်ဓါတ်: ကိုထင်ကျော်တို. နေ.လည် ၁ နာရီလောက်မှာ ဆန်ဒပြပြီး ဖမ်းသွားပြီဆိုတာ မှန်ပါသလား
24 Aug 07, 22:19
pt: admin ခင်ဗျား .. အပြည့်အစုံ .. သို့ .. link တွေ error တက်နေပါတယ်ခင်ဗျား
24 Aug 07, 20:55
ကိုဈာန်: ပုံတွေကတော့ ဘလော့တွေမှာ ပါပြီးသားပုံတွေပါ ခင်ဗျ၊ အင်တာနက်မကိုင်နိုင်သူတွေ အတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ် ခင်ဗျ
Moe: Ko Zan, where can i get that cd?
24 Aug 07, 20:51
ကိုဈာန်: အခွေကြည့်ပြီး လမ်းပေါ် တက်လာနိုင်မယ့် ပြည်သူတွေကို မျှော်လင့်လို့ပါခင်ဗျ
24 Aug 07, 20:50
ကိုဈာန်: ဆန္ဒပြသူတွေ အခွေပါ
24 Aug 07, 20:49
Ko Zan: ကိုစိတ်ဓါတ် ၁၉ - ၂၃ အထိ လမ်းလျှောက် သူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေကိုပါ အဲဒါကို အခွေလုပ်ပြီး ဖြန့်နေပါတယ် ခင်ဗျ
24 Aug 07, 20:48
24 Aug 07, 20:41
စိတ်ဓါတ်: ကိုဈာန်ရေ ဘာအခွေတုန်းဗျ။ ဘယ်မှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို.ရမလဲ
24 Aug 07, 20:32
ကိုဈာန်: ခွေထုတ်ပြီးဖြန့်ပြီးပါပြီ နောက်ထပ် ထပ်လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လည်း ဒီသတင်းကြားရုံလောက်လူတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ မြင်ချင် တွေ့ချင် ကြပါတယ်၊
M.F.G: ရန်ကုန်-မန်လေးက လူတွေ ဒီမြန်ာTubeကို ဖွင့်လို့ရနေသေးတယ် ခင်ဗျ။ http://mmfree.getmyip.com/
24 Aug 07, 20:29
Admin: ဟုတ်တယ် ကိုအမ်အက်ဂျီခင်ဗျ တခုမှ ဖွင့်မရပါ
24 Aug 07, 20:28
24 Aug 07, 20:22
မင်းခ: M.F.G ရေ တခုမှဖွင့်လို့မရဘူး
M.F.G: မိတ်ဆွေတွေ video informationတွေစုနေတယ်ဆိုလို့ linkတွေ တတ်နိုင်သလောက်ကူရှာပေးတာပါ.. အရေးကြီးတာ အတွင်းအပြင် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ပါ
24 Aug 07, 19:58
M.F.G: ဟုတ်ကဲ့ youtube ကြည့်လို့ရတဲ့လင့်ခ် ထပ်ပေးထားပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ
24 Aug 07, 19:57
Admin: M.F.G တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ youtude ကြည့်မရပါ။
M.F.G: For .mm surfer, u can watch mm youtube from http://mmfree.getmyip.com/
24 Aug 07, 19:53
M.F.G: Many video footages @ http://youtube.com/group/freeburma
24 Aug 07, 19:19
telesoe: ခုန က ထိုင်းတီဗွီ chennal9မှာတော့ မြန်မာပြည်က လူထု လမ်းလျှောက်တဲ့သတင်းကို ပုံတွေ နဲ့ တကွ ပြသွားတယ် ၊
24 Aug 07, 19:02
သြဂုတ်မိုး: YANGON (Reuters) - Thirteen prominent pro-democracy activists arrested this week in military-ruled Myanmar are being interrogated and legal action will be taken against them, the junta's official news
24 Aug 07, 18:46
Ko Zan: ကိုသြဂုတ်မိုး.... ဘာသတင်းထပ်ထူးသေးလဲခင်ဗျ။
24 Aug 07, 10:30
သြဂုတ်မိုး: မနက်လုပ်မဲ့ သူတွေကဆက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ လူထုက ကြံဖွ့ံတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို တော်တော် ဒေါသထွက်လာကြတယ်။
ငြမ်းချမ်း: ၁။ အပြင်က၀င် တာ ရယ် ၂။ သူတို့ အ ချင် ချင်းကွဲတာ ရယ်
24 Aug 07, 08:27
ငြမ်းချမ်း: အခြအနေ.. ၂ မျိုး ရှီတယ်
24 Aug 07, 08:26
ငြမ်းချမ်း: လုံးဝ.. မနိုင် နိုင် ဘူး........ အပြင်က၀င် လို ရ တဲ့ အချေအနေမျိူး ရောက်မ .. ဒီကောင် တွေ ဇတ်သိမ်းမယ်
24 Aug 07, 08:24
ငြမ်းချမ်း: မနိုင် နိုင် ဘူး........
24 Aug 07, 08:23
ငြမ်းချမ်း: ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေး ထားတဲ့.. ကိုယ် သခင် ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ခွေး လိုပေါ့..။
24 Aug 07, 08:22
aaaa: တကယ်စည်းလုံးရင် အသေအချာကိုနိုင်တယ် စစ်အစိုးရကို
24 Aug 07, 08:20
ငြမ်းချမ်း: အဲဒီမှာတင် . လုပ် ချင် ရာ လုပ် တော့တာဘဲ.. ပြည်သူလူထုကို တောင် လူမထင် တော့ဘူး
24 Aug 07, 08:19
aaaa: သုချမ်းသာဖို့ဘဲကြည့်တာ ပြည်သူဘာဖြစ်ဖြစ်
24 Aug 07, 08:18
ငြမ်းချမ်း: နအဖ ကို လျှော့တွတ်လို့မရ ဘူး ဗျ... သူမှာ.. Weapon , Money , Power ၃ ခုလုံးရှိတယ်
24 Aug 07, 08:17
24 Aug 07, 08:15
aaaa: လူလိုမသိတဲ့ စစ်အစိုးရကို ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ရမှာဘဲ
ငြမ်းချမ်း: နအဖ ကတော့ ဗျာ...အာဏာမျွှန်ပြီး...လူစိတ်ပျောက်နေပါဘီဗျာ..။
24 Aug 07, 08:13
aaaa: အာဏာရှင်စနစ်က တိုင်းပြည်မွဲဆေးဘဲ
24 Aug 07, 08:12
aaaa: အဓိကက အာဏာရှင်ပြုတ်ဖို့ဘဲ
ငြမ်းချမ်း: နအဖ ကတော့ဟေ.. သူအဖေ မဆလ ထက်ဆိုး တယ်။.... လမ်းလျှေက်တာတောင် မလျှောက်ရဘူး...မဆလ တုံက.. ကျူပ်ငယ်ငယ် ဗျ.. လမ်းလျှေက်ပွဲ ဆို ပျော်စရာကောင်းပ...ကောက်ညှင်ပေါင်း တောင် စားရ သေးတယ်
24 Aug 07, 08:10
aaaa: အင်း ကျူးဘားလိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်
24 Aug 07, 08:07
aaaa: love peace
ငြမ်းချမ်း: ..လူ ၁၂ ယောက်နဲ့စ တဲ့.. အာဏာရှင်တော်လှန်ရေး ကို သွားသတိရ မိတယ်ဗျာ..
ငြမ်းချမ်း: ပြည်ချစ်စစ်သား(၁၂) ယောက်.. တောခိုတယ် .. သတင်းကြားတော့.. ဖီရယ်ကက်စထရို ရဲ့..သေနပ် ၁၂ လက်..လူ ၁၂ ယောက်နဲ့သ တဲ့.. အာဏာရှင်တော်လှန်ရေး ကို သွားသတိရ မိတယ်ဗျာ..
24 Aug 07, 07:58
aaaa: peace walkers are heroes for people
24 Aug 07, 07:56
aaaa: so praise for peace walkers
aaaa: we love peace walking
24 Aug 07, 07:55
ငြမ်းချမ်း: ငြိမ်းချမ်း: လက်နက်နှင့်အတူ.. ဒီနေ့ တောခိုသွားသော..တတ်သား(၁၂) ယောက် အား...အစိုးရမှ အပူတပြင်းလိုက်လံရှာဖွေ(BBC)
ငြမ်းချမ်း: ငြိမ်းချမ်း: Bago လေကြောင်ရန်ကာကွယ် ရေးတတ် တတ်သားဦးရေ (၁၂) ယောက် ရိုင်ဖယ်လ် ၃၄ လက် နှင့် အတူ ရိုးမဘက်သို့.. ထွက်ပြေးချီတတ် (BBC, 24th Aung evening)
24 Aug 07, 07:54
aaaa: pls stop swelling
24 Aug 07, 07:52
aaaa: sweeling is not good
24 Aug 07, 07:49
aaaa: blind kyi bar lar
24 Aug 07, 07:11
ထွန်း: မလေးရှား နိုင်ငံမှာ ရဲဝံ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသူတွေဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရတော့ တော်တော်လေးစားမိပြန်တယ်ဗျာ။
24 Aug 07, 07:06
ထွန်း: မန်းတလေးက ရန်ကုန်နဲ့မတူတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ မန်းတလေးက သေချာတာ ဘုန်းကြီးစ မှ စမဲ့ပုံဘဲ။ မန်းတလေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေစပြီဆိုတာနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေပါမှာ ဆိုတာ အသေအချောဘဲ။
24 Aug 07, 07:02
ထွန်း: ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ပါအောင်စည်းရုံးကြပါ။ ဘုန်းကြီးတွေလည်း ပါသင့်ပါပြီ အခုလောက်ဆို၊ အင်း ပြန်စဉ်းစားကြည့် ရင် ဘုန်းကြီးတွေကလည်း အရင်က ကိုယ်တော်တွေကို ဟုတ်တော့ဘူးနေမှာပါ။
Thinker - 2: Yes. Please carefully think about of distribution video. It's the most important and valuable in our history. I agree.
24 Aug 07, 06:59
ထွန်း: သေချာတာကတော့ ဘုန်းကြီးတွေကို ခွေးမကိုက်ရဲတာဘဲ။
24 Aug 07, 06:58
ထွန်း: ပြည်သူတွေနဲ့အတူဘုန်းကြီးတွေပါ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာသင့်ပြီ။ ဘုန်းကြီးတွေ ပူးပေါင်းမှု့ နောက်ကျရင် ပြည်သူခံရမှု့များလေဘဲ။ ဒါတွေကို ဘုန်းကြီးတွေသိသင့်တယ်။ ကြံဖွတ် ခွေးတွေကို ဘုန်းကြီးတွေကမှ နိုင်မှာ၊
24 Aug 07, 06:54
ထွန်း: ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုခု တော့ပါဝင်သင့်ပြီ ဆိုပြီး အခု စီဘောက်မှာ ကျွန်တော့်ခံစားချက်လေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီစစ်အစိုးရ တရားလွန်လုပ်နေပြီ။
24 Aug 07, 06:53
ထွန်း: ဒီနေ့ည ဗီအိုအေ နားထောင်တော့ အမေ လူထုဒေါ်အမာနဲ့တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းလေးပါလာတယ်။ နောက်ဆုံး အမေပြောသွားပြီး အမေလူထုဒေါ်အမာ ငိုသွားတယ်၊ ပြည်သူတွေကို သနားလို့ ဆိုပြီး ငိုသွားတယ်။
24 Aug 07, 06:52
24 Aug 07, 06:51
24 Aug 07, 06:17
Thinker: Please think twice and act wise.
Thinker: it will be valuable and remarkable. But if we could only show the faces/images of protestors, one day that would be evidence for government to accuse these innocent people. Please think twice and act
24 Aug 07, 06:16
Thinker: To kozan and all: we should consider pros & cons before distributing video file hastily. If we can show how the thugs behaved and treated to walkers/demonstrators/protestors abusively and cruelly, it
24 Aug 07, 06:08
Liu: Do you the democracy forces living abroad can help the people in Myanmar?
24 Aug 07, 06:06
Liu: Hello what abt today
24 Aug 07, 06:05
24 Aug 07, 05:48
ငြမ်းချမ်း: Hello.. ကို နှစ် ရေ.. ခင်ဗျား Email Address ပေးပါ။ အရေးတကြီး ပို့စရာရှိလို့ပါ။
24 Aug 07, 04:07
ငြမ်းချမ်း: ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မောင်ငြမ်းချမ်း။
24 Aug 07, 03:51
no name: yes, i'll make sure to do it ... i want to change gov n i want freedom n Democracy for all ,
24 Aug 07, 03:47
ငြမ်းချမ်း: ဒီ ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ကလေးကို.. ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးအင်အားစု အားလုံး..တိုင်းရင်းသားအင်အာစုအားလုံးကို Media မှတဆင့်.. ကျေးဇူးပြုပြီး..စကာလက်ဆောင်ပါးပေးပါ။
24 Aug 07, 03:44
no name: Sometimes i was thinkin to hire or find suicide bomber for them.
24 Aug 07, 03:40
no name: how we'll do ?Hw we gonna start ? It's team work . shoudbunited !
24 Aug 07, 03:39
no name: but
no name: i agree ur idea
24 Aug 07, 03:38
no name: i agree nyine chan
ငြမ်းချမ်း: ဒါမသာ.. အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့.. ပြည်တွင်းက အကျပ်အတည်းပြည်သူတွေ..အတွတ်တကောင်းဆုံးအဖြေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
24 Aug 07, 03:30
ငြမ်းချမ်း: ဒါမ အဲဒီ Conference ရဲ့. .. .. ရလဒ် က.. ကုလ ကိုတရားဝင်..အသိပေးပြီး.. Gov ကို Force ပေး နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
24 Aug 07, 03:27
ငြမ်းချမ်း: ပြည်ပရောက် ရှိသမျှ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ........ရှိသမျှတိုင်းရင်သားအင်အားစုများ....ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့..အရေးပေါ် Conference အမြန်ခေါ်ကြပါ။
ငြမ်းချမ်း: ပြည်တွင်းအခြေအနေ သက်သက်ကိုပဲ.. Wait and See.. လုပ်မနေကြတော့ပါနဲ့
24 Aug 07, 03:21
ငြမ်းချမ်း: ပြည်ပရောက် ရှိသမျှ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ........တနေရာမှာ.. တစ်န်ိင်ငံမှာ.. အရေးပေါ်.. Conference ခေါ်ပါ။
24 Aug 07, 03:18
ငြမ်းချမ်း: သိပ်မှန်တယ် ....တိုင်းရင်းသားအားလုံးတတ်ညီလက်ညီ လုပ်ဆောင်သင့်ပြီ။
24 Aug 07, 03:15
x: မင်းပြောမှလားလို့ မပြောပါနဲ့ ဒီတခေါက် ဖမ်းတာက အရင်တခေါက် တွေနဲ့ မတူပါဘူး လွတ်လပ်စွာ လမ်းလျှောက်နေသေယ ပြည်သူ တယောက်ကို ဖမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့လို အပိုင်ကိုင်ထားလို့ ရမဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတ
24 Aug 07, 03:14
Ma Khine: i agree this..we need to do somthing for inside myanmar people
x: ခေါင်းဆောင်မဲ့သူ မဖြစ်မနေ လိုနေပါတယ်..
x: Officially မရရင်တောင် Media င်္င်္Force ကို Power အမြင့်ဆုံးရအောင် ဟို အဖွဲ့ ကြေငြာချက် ဒီအဖွဲ့ ကြေငြာ ချက် မဟုတ်ပဲ အားလုံးရဲ့ ကြေငြာချက် ဆိုတာလိုမျိုး ဖြစ်အောင် ပေါင်းစီးသင့်တယ်..
24 Aug 07, 03:08
x: တကယ်ကို လိုအပ်နေတာက ခေါင်းဆောင်ပါ.. ဒီတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကို လွတ်ပေးဘို့ နအဖကို Force တခု အနေနဲ့ Officially ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင် သင့်တယ်
24 Aug 07, 03:07
x: ပြည်ပကလူများရဲ့ အားလိုအပ်နေပါပြီ.. အတွင်းက လူများက တော့ကြားရတဲ့ သတင်းတွေလိုပဲ ဟိုကပိတ် ဒီကပိတ် ရိုက်မယ် ဆိုတာကြီးပဲ ဆိုတော့ကာ ဘာမှလုပ်မရပါဘူး. ဘယ်လိုမှလည်း ပြည်သူတွေကို ပါဝင်နိုင်လောက်တဲ့ အားမရှိပါဘူး
24 Aug 07, 02:38
Niknayman: http://www.peacefulwalkingtogether.blogspot.com/ ကို တာဝန် ယူထားသူခင်ဗျာ - ပို့ တူတာတွေ ဒီ စီဘောက်ထဲမှာ (၃)ခါ ၀င်နေပါတယ်။ စစ်ပေးပါဦး... တစ်ခါဘဲ ၀င်သင့်ပါတယ်။
24 Aug 07, 02:27
Ko Zan: ကျနော် ၂၂ ရက်ကနေ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ပြည်တွင်း ဆန္ဒပြပွဲအခွေ ဖြန့်ဖို့ အက်စ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို တွေကို ရသလောက် kozanye@gmail.com ကို ပေးပိုစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား...
24 Aug 07, 02:26
24 Aug 07, 02:11
ငြမ်းချမ်း: လက်နက်မပါ၊ ကိုယ်ဗလာနဲ့.... အခွင့်အရေါ်မျော်ဖို့ဝေးစွ...ကိုယ်ကျိူုးစွန့်..ပြီး အမှန်တရားဘက်က. ရပ်တည်ရဲတာမ.. သတ်တိ(Brave) ..ကွ
24 Aug 07, 02:06
ငြမ်းချမ်း: ဘာလက်နက်မ မပါတဲ့လူပို.. သေနပ် ကြီးတွေပြပြီး၊ ဖမ်းလိုက်ဆီးလိုက်..ချိမ်းခြောက်လိုက် လုပ်တာ.. သူတို့ကိုယ် သူတို့..ရဲစွမ်းသတ်တိ(Brave)လို့ ထင် နေလာမသိဘူး...
24 Aug 07, 01:36
heaven: pyi tu tway la` par win poe lo par tal
24 Aug 07, 00:46
MScholar: သြော်...မြန်မာ တွေများ Very Patient ပါပဲ
24 Aug 07, 00:43
MScholar: သံဃာထု ငြိမ်နေမည် မထင်ပါ...
24 Aug 07, 00:42
24 Aug 07, 00:40
MScholar: Living in fearalong time ဆိုတော့
24 Aug 07, 00:39
MScholar: ပြည်သူတွေပူးပေါင်း ပါဝင်မှုနဲတယ်...
24 Aug 07, 00:38
fiona: dog htet soe dae` har tway
fiona: dog tway taung thu doh htet narr l' ta ohn mel
MScholar: ပစ်လားခတ်လားဆိုရင်တော့ .......
24 Aug 07, 00:37
khinminzaw: သာကေတက ပစ်တဲ့သတင်း မဟုတ်ဘူးတဲ့ မေးပြီးပြီ
fiona: tharkayta new ka mhan par tha la ?
24 Aug 07, 00:35
MScholar: သံဃာထု အင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင်လာရန် မျော်လင့်သည်..
24 Aug 07, 00:29
Avril: သာကေတမှာ ပစ်ခတ်လို့ ပြည်သူတွေ သေကျေကုန်တယ်လို့ စလုံးမှာ SMS တွေ လက်ခံနေရပါတယ်တဲ့။ အမှန်ဟုတ်မဟုတ် သိသူများ Confirm ပေးကြပါ။
2323 Aug 07, 23:43
ဇင်ယော်: အဖမ်းခံရသူအားလုံးနဲ့ ရဲဝင့်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသသူတွေ အားလုံးကို အထူးချီးကျူး ဂုဏ်ပြုပါတယ် ခင်ဗျာ
23 Aug 07, 23:33
23 Aug 07, 23:16
mg: နောင်နှစ်မှာ ၈ သုံးလုံးထပ်ပါတယ်၊ ၀၈-၀၈-၀၈ ၊ (လွတ်လပ်မှုသို့ လမ်းလျှောက်ခြင်း) အဲဒီအမည်နဲ့ဆက်လျှောက်ကြရအောင်
23 Aug 07, 23:15
mg: Walk to Fredom! လွတ်လပ်မှုသို့ လမ်းလျှောက်ခြင်း
23 Aug 07, 23:12
nAY: KMZ, i heard nothing happen there
23 Aug 07, 23:00
ခင်မင်းဇော်: အခု ၂ နာရီက မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ၁၆ ယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။
23 Aug 07, 22:48
second man: aa ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ တင်ထားပါတယ် ....
23 Aug 07, 22:46
Olive: မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ မှာ ဖြစ်နေတယ်တဲ့ ကြံ့ ခိုင်ရေးက ဖမ်းနေတယ်တဲ့ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းက အခုပဲလှမ်းပြောပါတယ်
aa: ဟာတွေဟာ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
ကိုမော်ကြီး: သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူအပေါင်း၏လိုလားတောင့်တသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ပြည်သူ့အင်အားဖြင့် ဖန်တီးရယူနိုင်ရမည်။အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိတိုက်ပွဲဆင်အောင်မြင်ရမည်
aa: မနေ့က ကျနော်တို့က ဒီကနေ့မှာ အကြီးကြီးလုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့မှ၊ ကြိုကြား ကြိုကြား လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အားလုံး စုပြီးတော့ တနာရီကို ချိန်းလိုက်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် မနက်ပိုင်းတုန်းက ကြိုကြားကြိုကြား လုပ်မယ်ဆိုတဲ့
23 Aug 07, 22:44
aa: ကျနော်တို့ လုပ်မယ့်နေရာမှာ အင်အား ၂၀၀ ကျော်၊ ၃၀၀ ကျော်နဲ့ စောင့်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ မလုပ်တော့ဘူး ဆိုတာ သူတို့ မသိသေးဘူး။”
aa: သတင်းလည်း ကြားနေရတယ်။ မြင်လည်း မြင်နေရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အင်အားကို အဆုံးအရှုံး မခံနိုင်တာကြောင့် ဒီကနေ့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်တွေကတော့ တာမွေ အ၀ိုင်းထိပ်တို့၊
aa: အဖွဲ့ချုပ် ယူနီဖောင်းတွေ ၀တ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အုပ်စုကြားကို ၀င်ရောပြီးတော့ သူတို့ တင်ချင်တဲ့ စလိုဂမ်တွေ (ကြွေးကြော်သံတွေ) တင်မယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အချင်းချင်းကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့
23 Aug 07, 22:43
aa: ကျနော်ပြောတယ်လေ ပွဲလုပ်မယ့် ကိစ္စလေ၊ တာမွေမှာ လုပ်မယ့် ကိစ္စကို ကြံ့ဖွံ့အင်အားက တော်တော် သုံးတယ်ဗျ။ ဒုတ်၊ ဓားတွေနဲ့။ ဒီနေ့ဝင်ပြီး ခုတ်မယ်၊ ရိုက်မယ်လို့ သတင်းကြားတယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသား ဒီမိုကေ
23 Aug 07, 22:42
aa: ဆန္ဒပြပွဲလုပ်မည့် အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်နိုင် ပြောကြားချက်
second man: http://peacefulwalkingtogether.blogspot.com/ ကို ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ထားပါတယ်
Aug 07, 22:36coolG: ကိုယ့်ရဲ့ .. အီးမေးနဲ့ .. ရှိခဲရင်.. blog လိပ်စာတွေနဲ့ .. လုပ်ကြရင်.. ၇မလား.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဘက်တွေမှာတော့. လုပ်လို့ ရမှာပဲ
Aug 07, 22:36second man: http://peacefulwalkingtogether.blogspot.com/ ကို ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ထားပါတယ်
23 Aug 07, 22:35coolG: အဖွဲတစ်ခုအနေနဲ့ .. ၇ှိလာပါမယ်..
23 Aug 07, 22:34coolG: အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်.. ဆန္ဒပြပွဲက.. အရမ်းကြီး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး သေးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ .. ဒီ Online ပေါ်မှာ လူတွေရွေးပြီး.. online သတင်း အဖွဲ့ .. လိုမျိုး လုပ်ရင် နောင်အတွက်လည်း..
23 Aug 07, 22:32second man: ဖိုးဇေ မရှိပါ ။ လူစားထိုး တာဝန်ယူထားပါတယ်
23 Aug 07, 22:29ဇင်ယော်: ပီးကော့က ဘယ်က တင်နေတာပါလဲ
23 Aug 07, 22:25ဖိုးဇေ: ဖိုးဈာန် ။ ပီးကော့ကို မဘန်းသေးဘူးလား။ မဘန်းရသေးရင် ဘန်းလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
23 Aug 07, 22:23NiThit: ရေရှည် တိုက်ပွဲ မို့အတွေးအခေါ င်္ကို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ကြပါ။ အမှန် နဲ့အမှား တိုက်နေ တာပါ။ဒါကြောင့် အမှန်က တနေ့ မု့ ချ နိုင် ရမှာ ပါ။
23 Aug 07, 22:22ုkoyinaaw: niThit လုပ်ပေးမယ်
23 Aug 07, 22:19NiThit: mizima တက် လိူ့ရ ရင် update လေး တင်ပေးကြပါ။ strike ကို call off လုပ် တယ်လို့ရေးထား လို့ 
23 Aug 07, 22:17ခင်မင်းဇော်: သာကေတက ပစ်တဲ့သတင်း မဟုတ်ဘူးတဲ့ မေးပြီးပြီ
23 Aug 07, 22:10koyinaaw: မထူးပါ ....
23 Aug 07, 22:09nAY: the police still block the road
23 Aug 07, 22:09nAY: in sg, this evening cancle
23 Aug 07, 21:59Micro: တာမွေသတင်းဘာထူးသေးလဲ
23 Aug 07, 21:58Micro: တာမွေသတင်းဘာထူးသေးလဲ
23 Aug 07, 21:57Micro: တာမွေသတင်းဘာထူးသေးလဲ
23 Aug 07, 21:49ဇင်ယော်: ကျနော်လည်း ပြန်ရောက်လာပါပြီ
23 Aug 07, 21:48Olive: စင်ကာပူမှာ ဒီနေ့ ညနေ အစီအစဉ် ဆက်ရှိသေးလား သိပါရစေ
23 Aug 07, 21:48Olive: အခု ရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားမှု မရှိတာလား
23 Aug 07, 21:32ပြောင်းလဲလိုသူ: ဘာတွေဖြစ်ကုန်နေပြီလဲ။ ကျွန်တော် ခဏပဲ အဆက်ပြတ်သွားတာနော်။
23 Aug 07, 21:24koyinaaw: မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာအလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့မှ လူခုနှစ်ဦး အဖမ်းခံရ ....
23 Aug 07, 21:08kill: hey, nyein hla che lar ?achayanay hto loe lar ?
23 Aug 07, 21:02kill: hey, nyein hla che lar ?achayanay hto loe lar ?
23 Aug 07, 20:57တယ်လီစိုး: http://www.mizzimaburmese.com/breaking_news.php
23 Aug 07, 20:57တယ်လီစိုး: ရေရှည်တိုက်ပွဲဝင်ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ဆုံးဖြတ်
23 Aug 07, 20:57တယ်လီစိုး: ဆန္ဒပြပွဲ အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်း
23 Aug 07, 20:45agk: ကျော်သူကို ဖမ်းသွားပြီလား သိချင်တယ်။
23 Aug 07, 20:41Moe: ရန်ကုန်အခြေအနေကကော သြဂုတ်မိုးရေ
23 Aug 07, 20:38သြဂုတ်မိုး: ရေနံချောင်းမှာတော့ ဒီနေ့ဆက်ဖြစ်တယ်။
23 Aug 07, 20:19တယ်လီစိုး: နေ့လည်ဖက် ဘာမှထွေထူး မကြားကြရသေးဘူးနော်
23 Aug 07, 19:23admin: ကိုနစ် စီဘောက်က သတင်းလဲသိရအောင် တချို့ သတင်းတွေ ၂ ခါရိုက်စရာမလိုအောင် ကော်ပီတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
23 Aug 07, 19:22admin: ကိုနစ် စီဘောက်က သတင်းလဲသိရအောင် တချို့ သတင်းတွေ ၂ ခါရိုက်စရာမလိုအောင် ကော်ပီတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
23 Aug 07, 19:22ckk: FEC 1316 ဘဲရှိတော့တာလား..ဈေးကျသွားတာပေါ့နော်
23 Aug 07, 19:21သြဂုတ်မိုး: ဒေါ်လာဒီနေ့ပေါက်ဈေးကတော့ အစီမ်း ၁၃၃၀ FEC ၁၃၁၆။ ဘက်စ်ကားခတွေ တကယ်မကျသေးဘဲ ခရီးတိုသွားသူတွေကို အထူးဈေးသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်
23 Aug 07, 19:16koyinaaw: မလေးမှာ ဒီ ၂ရက် ၃ရက်အတွင်းမှာ ဆန္ဒပြပွဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်.. white shirt တူညီဝတ်စုံတွေနဲ့ပါ
23 Aug 07, 19:14ပေသီး: ဒီနားမှာထူးရင်အကြောင်းကြားမယ်ဗျို့
23 Aug 07, 19:14ckk: လုပ်ကြပါဦး..သတင်းထူးလေးဘာလေး
23 Aug 07, 19:14ပေသီး: ကျောက်မြောင်းဈေးမှတ်တိုင်မှာတော့ မတွေ့သေး
23 Aug 07, 19:14ckk: ဘာမှလဲမထူးတော့ပါလား..
23 Aug 07, 19:05admin: ကို စိတ်ဓါတ်ရေ...
23 Aug 07, 19:05admin: တာမွေဈေးရှေ့မှာ စုရုံးတယ်လို့သတင်း ကြားပါတယ်ခင်ဗျား...
23 Aug 07, 19:01သြဂုတ်မိုး: from the wall street journal
23 Aug 07, 19:00သြဂုတ်မိုး: the rising costs of its energy imports, such as gasoline and diesel fuel.
23 Aug 07, 18:59M.F.G: credit: dreamers22
23 Aug 07, 18:59M.F.G: U Ohn Than solo-demo clip @ http://www.youtube.com/watch?v=hdxxXp63P4o
23 Aug 07, 18:57kl: let's forget him
23 Aug 07, 18:57kl: peacock might same person with naywin, မဖြစ်စေလိုသူ because he never write english
23 Aug 07, 18:57သြဂုတ်မိုး: Australia's Macquarie University. Yet thanks to fiscal mismanagement and crumbling energy infrastructure, the junta hasn't been able to exploit the value of its reserves, or to protect itself from the
23 Aug 07, 18:57သြဂုတ်မိုး: The country sits atopasizable reserve of natural gas -- at current prices, its 540 billion cubic meters could fetch $2 billionayear for the next 40 years, according to estimates by Sean Turnell of23 Aug 07, 18:54
telesoe: ငါ တို့ အားလုံး ဟာမြန်မာနိုင်ငံကြိးသား ညီရင်းအစ်ကိုမောင်နှမတွေပါ။ အရေးကြိးနေပြီ သွေးစည်းညီညွတ်ကြပါစို့ ။
admin: ထပ်လည်း မပိတ်ချင်တော့ပါ ၃ ခါ ပိတ်ထားပြီးပါပြီ...
admin: ကိုပီးကော့ ခင်ဗျား... ယဉ်ကျေးစွာပြောဆို နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား....
23 Aug 07, 18:53
kl: ပျော်စရာကြီး ဟိုဘက်မှာ နေ၀င်း=မဖြစ်စေလို သူကို ၀ိုင်းဆဲနေကြတယ်
telesoe: အားလုံးက လုပ်နေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ယခု Cbox တွေကိုလည်း စံနစ်တကျ။ သတင်းနဲ့ အချက်အလက်တိကျရေး အတွက် အဓိကသုံးကြခြင်းအားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြရအောင်လား ၊
telesoe: အခု ပွဲ က ညီဖို့ ရယ်။ သွေးအေးဖို့ ရယ်။ ဥာဏ်ကို သုံးဖို့ ရယ် ဘာလုပ်လုပ် စံနစ်ကျဖို့ ရယ် လိုပါတယ်၊
23 Aug 07, 18:51
telesoe: ဟုတ်ပါတယ် peacock ခံခဲ့ရသလို ကိုယ်လဲခံခဲ့ရတာ တမျိုးလုံး အဖိုးလက်ထက် အဖေလက်ထက် အခု ကိုယ်တို့ လက်ထက်မကျန်အောင် ပြောလို့ မဆုံးအောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ က လူသားလေကွယ်။
telesoe: paecock ရေ ကျေးဇူးပြုပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စကားလုံးနဲ့ ပေါက်ကွဲပါကွယ် နော်။ အခု Cbox ကို အမျိုးသမီးအမျိုးသားအကုန်က ဖတ်နေပါတယ်။ စိတ်ထိန်းပါနော်။ အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုတိကျဖို့ ပဲကျိုးစားကြရအောင်နော်။
23 Aug 07, 18:43
MaungNyo: walkers' news.
MaungNyo: http://phyuphyuthin.blogspot.com/ hass walker's new.
23 Aug 07, 18:39
သြဂုတ်မိုး: နောက်မှ သိသမျှထပ်ပြောမယ်
သြဂုတ်မိုး: တော်တော်များများမှာဖြစ်နေတာ၊ မကွေး၊ မြစ်ကြီးနား အစရှိသဖြင့်။ နောက်မှ သိမမျှကို ထပ် ပြောမယ်။
23 Aug 07, 18:29
bamathwae: ကိုကျော်သူ...မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ မိန့်ခွန်းပြောနေတယ်လို့ကြားတယ်
23 Aug 07, 18:28
Moe: သြဂုတ်မိုးရေ ဘယ်နယ်တွေဆိုတာလေးပြောပါအုံး
23 Aug 07, 18:26
hi: this is wanderful new
သြဂုတ်မိုး: နေလယ် ၁ နာရီ တာမွေဈေး တာမွေပလာဇာဘက်မှာ စုလုပ်မယ်။ အခုလောလောဆယ် နယ်တွေမှာ နဲနဲစီ ဖြစ်နေတယ်။
23 Aug 07, 18:19
jimmy: kozan -------- i just come back from work . do u hear any yet about today?
23 Aug 07, 18:17
ခင်မင်းဇော်: Hla Hla Thein: I m not sure (သတင်းမခိုင်လုံသေးပါ) that's what they told me in Gtalk
23 Aug 07, 18:15
ခင်မင်းဇော်: Hla Hla Thein: ရွှေဂုံတိုင်တွင် ကျောင်းသား၅၀၀ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြငံ် လမ်းလျှောက်ချီတက် နေကြောင်းသိရပါတယ်
jimmy: hello to all
ခင်မင်းဇော်: Than Zaw Aung: တာမွေဈေးနားမှာ ရဟန်းတော်တစ်ပါး မှ အူမတောင့်ခြင်းနှင့်သီလစောင့်ခြင်းအကြောင်း ၁၀-မိနစ်ခန် ဟောကြား ကြောင်း်ကြားရပါတယ်။
23 Aug 07, 18:04
telesoe: ဘာမှမထူးခြားပဲငြိမ်နေခြင်းသည် တခုခု ကြီးကြီးမားမားထူးခြားမှုဖြစ်ရန်အတွက်တာစူနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊
23 Aug 07, 17:56
Ko Zan: ကိုစိတ်ဓါတ် ဘာထူးသေးတုန်းဗျ
Ko Zan: ကိုပြောင်းလဲလိုသူ....၊ ကိုအိပ်တ်စပတ်စ်၊ ကိုဂျင်မီ ... သတင်းထူးလေးလုပ်ပါအုံးဗျာ...
23 Aug 07, 17:48
Ko Zan:ီကျနော်ပြန်ရောက်လာပါပြီ ခင်ဗျ...
23 Aug 07, 17:47
Ko Zan: ကျနော်လာပြ
23 Aug 07, 17:46
GX: Anyway, my upmost respect to all those citizens protesting in Burma without the help of any overseas democracy groups and really hope that their efforts will not go in vain
23 Aug 07, 17:42
GX: These organizations have been exploiting the misery of Burma for their own personal benefit and fighting against each other instead of being united
ခင်မင်းဇော်: ပုသိမ်မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသွားပါတယ် ၂၄ ရက်မနက် ၉ နာရီခန့်က ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည် စုံစမ်းဆဲပါ
GX: Finally the people of Burma has to count on themselves.....those foreign based democracy groups cannot be relied upon in times of need
admin: ဆက်ပြောပါခင်ဗျာ..ဂရူမစိုက်ကြပါနဲ့ လဒတွန်လို့မိုးမလင်းပါဘူးခင်ဗျ
23 Aug 07, 17:29
admin: ဒါ လဒကြီးပါ ဒေါင်းအယောင်ဆောင်ထားတာပါခင်ဗျ..မကြောက်ကြပါနဲ့
admin: Peacoack အတုကြီးကိုအက်ဒမငိမှ..ဖင်ဆောင့်ကန်ထုတ်လိက်ပါကြောင်း ..ဆက်ပြောကြပါခင်ဗျာ..ကျေးဇုပါ
23 Aug 07, 17:19
ခင်မင်းဇော်: ခွေးကောင်ပီးကော့ သေချင်ဆိုး ဟဲ့ခွေး မလာနဲ့
ခင်မင်းဇော်: ပီးကော့ ဘန်းထားလဲ နောက်အလုံးတွေနဲ့ ၀င်နေတယ် အခုပီးကော့က စစ်တပ်ဖက်ကကောင်ပဲ ဆိုတာ သိသာနေပြီ
23 Aug 07, 17:15
ခင်မင်းဇော်: ကိုပီးကော့ မဆဲပါနဲ့ ယဉ်ကျေးပါ
ခင်မင်းဇော်: ကိုစိတ်ဓါတ် ဒီနေ့လည်း ဆက်လျှောက်ကြမယ်တဲ့
23 Aug 07, 17:12
စိတ်ဓါတ်: အတော်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ ဘန်းကျော်က သူများဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
စိတ်ဓါတ်: ဆီဈေးတက်ခြင်းနောက်ကွယ်တွင် http://www.mediafire.com/?1cjcymfk5hs
nAY: we can't change the past
23 Aug 07, 17:11
nAY: but we still can write the new history
nAY: if most of the soldiers r @ Hludu Side,........8888 will never end up with blood
23 Aug 07, 17:09
nAY: very huge amont of army guys in myanmar, rite,....
nAY: SZY, if all army dare to face the truth, think what will be next?
23 Aug 07, 16:55
shwe zin yaw: နေမယ့် အစားကျနော်တို့လို ၈၈ နောက်ပိုင်းမှ စစ်တပ်ထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ကျနော့်လို ပြည်သူအတွက် ခံယူချက်တွေကို ပြန်ပြီး နှိုှးဆွပေးဖို့ ကြိုးစားကြရင် ................
23 Aug 07, 16:54
shwe zin yaw: သြော် အရေး အကြီးဆုံး ပြောစရာ တခုကျန်ခဲ့တယ်ဗျ။ ၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးတုံးက ကျနော်တို့လည်း ကျောင်းသားငယ်တွေ အဖြစ် သေနက်ကျည်ဆံတွေကြား ပြေးခဲ့ပုန်းခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာပါ။ ကျနော်တို့ မိုက်ခဲ့တာကို အပြစ်တင်
23 Aug 07, 16:48
shwe zin yaw: ကဲ မိတ်ဆွေ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျနော် တင်ပြခဲ့တာတွေထဲမှာ မယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်း မဆီလျော်တဲ့ အတွေး တခုတလေ ပါခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ အားလုံးကို ဒီနေ့အတွက် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
23 Aug 07, 16:46
shwe zin yaw: ဒေါင်း ဆိုတဲ့နာမည်တပ်ထာ့းရင် ဒေါင်းလို လှပတင့်တယ် စေချင်ပါတယ်။ တွန်သံချိုစေချင်ပါတယ်။ မြင်သူ ရင်မောငေးမှိုင်စေချင်ပါတယ်
23 Aug 07, 16:45
shwe zin yaw: ယဉ်ကျေးတဲ့ သူတွေသာလျှင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တယ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံတယ်ဗျာ
23 Aug 07, 16:44
shwe zin yaw: ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို အသေးစိတ် ကျနော် မသိပါဘူး။ ကျနော်သိတာ လွတ်လပ်ယဉ်ကျေး။ မတရားမှုကင်းတာကို ဆိုလိုတယ် ထင်ပါတယ်
23 Aug 07, 16:43
shwe zin yaw: ရှိနေတယ် ဆိုတာလေးကိုလေ ကိုပီးကော့ မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ သိအောင် လှမ်းပြောပေးပါလားဗျာ
shwe zin yaw: ကိုပီးကော့ ခင်ဗျား ကိုယ့်စက်နဲ့ ကိုယ်သုံးတာ ရိုက်တာမို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဒီစကားဝိုင်းလေးက လွတ်လပ်ယဉ်ကျေးတဲ့ ရပ်ဝန်းလေးကို တောင့်တနေသူတွေအများစု
23 Aug 07, 16:41
shwe zin yaw: ပြိုင်တူတွန်းလိုက်ရင် အလွယ်လေးပါ။ ရှေ့က ချောက်ကမ္ဘားကြီးကိုလည်း အားလုံးအင်အားနဲ့ ၀ိုင်းဖို့လိုက်ရင် မကြာခင်ပြန်ပြည့်သွားမှာပါ
reversed: distrust is widely spreaded in Myanmar. People do not trust each other. A great blow to unity.
peacock: 88 ကလိုပဲရဲတွေ.ရဲခေါင်းဖြတ်စစ်ခွေးတွေ.စစ်ခွေးခေါင်းဖြတ်မအေလိုးတွေနိပ်စက်တာကြာပီ်
23 Aug 07, 16:40
shwe zin yaw: ရှေ့မှာ ချောက်ကမ္ဘား ။ နောက်မှာ ကြိုးစင် ဘေးမှာ ပြည်သူလူထုကြီးပါ။ ဒီလို ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ကျနော်တို့ အားလုံး အတူတူ ရောက်နေပါတယ်၊ အဲဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ နောက်က ကြိုးစင်က ဆွေးနေပြီဗျာ ပြည်သူရယ် ကျနော်တို့ရယ်
23 Aug 07, 16:37
shwe zin yaw: ဒီအတွက် ဒီနေ့ ကျနော် ၀င်လာပြီး ဆွေးနွေးတာပါ။ ကိုဂျိမ်းစ် တို့ ရှိသေးပါရဲ့လား ခင်ဗျား ။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံး မရမ်းစေချင်ပါဘူး
စိတ်ဓါတ်: မျိူးချစ်စစ်သားတွေ ပါလာရင် ပြည်သူကြီးက ကြိုဆိုမှာပါ။ နေ၀င်းအာဏာရတာလဲ ပြည်သူရဲ. ယုံကြည်အားကိုးမှူကို ရရှိလို.ပါ။ ပြီးမှ အလွဲသုံးစားလုပ်တာပါ
23 Aug 07, 16:36
shwe zin yaw: ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ပြင်ပ ရပ်ဝန်းတွေကြောင့် စောစောက ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ ရပ်ဝန်းငယ်လေးတွေဟာ အစိုင်အခဲ အဖြစ် စုဖွဲ့မလာနိုင်ကြဘူး။ အမှီအတွယ်အားကိုးရာ မရှိတဲ့ မျိုးစေ့ မကြီးထွားနိုင်သလိုပါဘဲ
23 Aug 07, 16:34
shwe zin yaw: ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံး အပြစ်တင်ပြီး အားလုံးကို အပြစ်မြင်တဲ့ စိတ်တခုထဲဘဲ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားအချို့တွေ ( ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ မပါပါ)
23 Aug 07, 16:33
shwe zin yaw: ပြည်သူလူထုထဲက သူတို့လို မျိုးချစ်စစ်သားတွေ ထွက်ပေါ်လာရင် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လိမ့်မယ် လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ
shwe zin yaw: ဥပမာ ကျနော်တို့လို မျိုးချစ် အရာရှိ စစ်သည်တွေ က ဦးဆောင်လို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လို လူမျိုးတွေ ဘေးဥပါဒ် သို့မဟုတ် တခုခု ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ဘယ်သူက ဒီသေနင်္ဂဗျူဟာ အတွက် တင်ကြိုပြင်ဆင် ထောက်ကူပေးနိုင်လဲ
ပြောင်းလဲလိုသူ: ဒီလောက်လွယ်မယ် မထင်ဘူးခင်ဗျ
23 Aug 07, 16:31
shwe zin yaw: စစ်တပ်ထဲကို အပြင်ပ အရပ်သားဝင်စည်းရုံးဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အချင်းချင်း အတွင်းမှာ ကျိတ်ဝိုင်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ် နှီးနှောနေကြတာတွေ တော့ ရှိပါတယ်
ပြောင်းလဲလိုသူ: ကျွန်တော်တော့ အလုပ်ကို လာရင်တော့ မနက်ပိုင်း ကားစီးတယ်၊ အဲ ပြန်ရင် တော့ အခုရက်ပိုင်း လမ်းလျှောက်ပြန်တယ်ဗျ
23 Aug 07, 16:29
MM88: စည်းရုံးနိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေကို မျက်စိနားဖွင့်နိုင်ဖို့ ထိရောက်တဲ့နည်းတွေရှာရမယ်
23 Aug 07, 16:28
shwe zin yaw: သူတို့ အတွက် စစ်သားကောင်းတို့ရဲ့ စံနမူနာတွေ ပြသမယ့်သူတွေ မကြာခင် ပေါ်ထွက်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ ခင်ဗျား
shwe zin yaw: ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ အားလုံး နိုင်ရာ။ ပိုင်ရာ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေရောင့်းရင်းထဲက ဒီလို လူမျိုးတွေကို ရသလောက် ကျနော်တို့ စည်းရုံးကြရမယ်
23 Aug 07, 16:27
MM88: ဟုတ်တယ်...ဘယ်စာအုပ်ဆိုင်မှလဲ မရှိဘူး..အားလုံးကို မျက်စိနားပိတ်ထားတာ...
shwe zin yaw: တကယ့်ကို ပစ်မိန့်ပေးတိုင်း မဲမဲမြင်ရာ ပစ်ချင်နေတဲ့ အငယ်တွေမှာ အဲဒီလို အသိ မရှိသလောက်ဘဲ ဆိုတာ ကျနော့ ကိုယ်တွေ့တွေပါ
23 Aug 07, 16:26
shwe zin yaw: အကြမ်းမျဉ်းသိတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေက ကျနော်တို့လို စာလေးပေလေး မတောက်တခေါက် ဖတ်တဲ့ စစ်သား စစ်ဗိုလ်လောက်ဘဲ သိတာဗျ
23 Aug 07, 16:25
shwe zin yaw: ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားတျို့တွေ အားလုံးကို အားကိုမှု အပြန်အလှန်နဲ့ ဘယ်လိုညီညွတ်အောင် လုပ်နိုင်ကြမလဲ ဆိုတာ ကျနော် တိုင်ပင်တာပါ
MM88: လူထုတရပ်လုံးက ဒါကို လိုချင်စိတ်ပြင်းပြလာအောင် လှုံ့ဆော်ရမယ်
MM88: အစားတခု မစားဖူးရင် အရသာ မသိသလိုပဲ..လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ကို မသိခဲ့တာ...
စိတ်ဓါတ်: အကြမ်းဖျင်းတော့သိကြပါတယ်ဗျ။ လွတ်လပ်စွာစာပေရေးသားပိုင်ခွင့်တို.။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တို.လောက်တော့ သိကြပါတယ်
23 Aug 07, 16:24
shwe zin yaw: အခု စစ်တပ်ထဲက စစ်အရာရှိဖြစ်တဲ့ ကျနော်က ရတဲ့ နည်းတွေနဲ့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လို မျိုးချစ်စစ်သားတွေ အတွက် အနောက်မှာ ကြိုးစင် ။ ရှေ့မှာ ချောက်ကမ္ဘား။ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ပြည်သူလူထုကြီး ရှိပါတယ်
MM88: စစ်သားမှ မဟုတ်ဘူး..ကျောင်းသားလဲ မသိဘူးဗျ...ဘယ်သူမှကို မသိဘူး...လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ...အဲဒါကို သိအောင် အရင်လုပ်ရမယ်...
23 Aug 07, 16:23
shwe zin yaw: ကျနော့်လို စာရေးတဲ့သူမျိုး အခုမှမြင်ဖူးတာ လက်တွေ့တခုရဲ့ အစလို့ မတွေးမိဘူးလား ခင်ဗျား ကိုပြောင်းလဲလိူသူရေး
MM88: အထင်သေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်...ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မသိခဲ့ဘူး...
23 Aug 07, 16:22
MM88: ဟုတ်တယ်...ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ရမယ်ဆိုတာပဲ သိတယ်...လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲမသိဘူး
shwe zin yaw: သူတို့ရဲ့ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတတွေးခေါ်ချက်တွေအားလုံး ပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်
23 Aug 07, 16:21
shwe zin yaw: လူ့အခွင့် အရေး ဆုံးရှူံးနေရသလဲဆိုတာ အကြမ်းမျဉ်း သူတို့နားလည်အောက် ရှင်းပြပါ။ စစ်သား။ အများစုဟာ ဒီကမ္ဘာကြီး အကြောင်းကို မသိကြပါဘူး။
ပြောင်းလဲလိုသူ: ကိုစိတ်ဓါတ်တို့၊ ကိုရွှေစင်ယော်တို့ ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ မပြောမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရမယ်။
23 Aug 07, 16:20
စိတ်ဓါတ်: ကိုရွှေဇင်ယော်ရေ စစ်တပ်ထဲ ၀င်စည်းရုံးဖို.ဆိုတာလေးက သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ စစ်တပ်ထဲက စစ်သားတွေက လှုံဆော်မှပဲရမှာ
shwe zin yaw: သိအောင် နိုင်ငံတကာက လူသားတွေ ဘ၀။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံက နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောပြပါ။ အားကျ တပ်မက်လိုစိတ်ပေါ်ပါစေ။ ပြီးတော့ သူတို့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘာကြောင့် ဒီလို
23 Aug 07, 16:18
စိတ်ဓါတ်: ဒိုင်နာစီးပြီးသောင်းကျန်းနေတဲ့ အပြောကြမ်းအဆိုကြမ်း စရိုက်ကြမ်း လူရမယ်းကားတွေပါ
shwe zin yaw: စစ်သားတွေကို စည်းရုံးချင်ရင် သူတို့ရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀က နစ်နာဆုံးရှူံးနေမှူတွေကို သိအောင်လုပ်ပါ၊ ပြီးတော့ လူသားတဦး ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာတွေလည်း ဆိုတာ မိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက စစ်သားတွေ
23 Aug 07, 16:17
reversed: New class in Burma. "Dynasty" born by NaAPha (male dogs) and USDA(female dogs).
23 Aug 07, 16:16
shwe zin yaw: မကြာခင်မှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် လူထုကြားထဲကနေ တတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကူညီပူးပေါင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်၊ ဒီနေ့ လမ်းလျောက် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုလည်း အလေးအမြတ် ဂုဏ်ပြုနေပါတယ်။
ပြောင်းလဲလိုသူ: ဆက်ဆွေးနွေးကြပါဗျာ။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
23 Aug 07, 16:13
စိတ်ဓါတ်: ကျွန်တော်တို.လဲ စစ်သားတွေ ငတ်နေကြတာသိတာပဲ။ ကျွန်တော့် အမျိုးတွေ ထဲမှာ တပ်ကြပ်အဆင့်နဲ့ စစ်သားရှိတာ သိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို.ကို ဘယ်လိုစည်းရူံးမလဲ
စိတ်ဓါတ်: စစ်သားတွေကို ဘယ်လိုစည်းရုံးရမလဲ။ အကြံလေးပေးပါဦး။
23 Aug 07, 16:12
shwe zin yaw: ကိုဂျိန်းစ် ဆိုတဲ့ လူမျိုးခြား နံမယ်ခံထားသူ ကိုမြန်မာက တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပါရဲ့လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုန်း
23 Aug 07, 16:11
shwe zin yaw: သူတို့တွေ ဖတ်မိလို့ သူတို့စိတ်ကူးတွေ အတွေးတွေ ပြည်သူ့ဘက်ကို ကူးပြောင်းဖေးမလိုတဲ့ ပရဟိတ စိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သွေးတစက်မှ မကျတဲ့ အောင်ပွဲလေးတွေ ဖြစ်မလာပေဘူးလား ခင်ဗျား
23 Aug 07, 16:09
shwe zin yaw: ကိုနေ၀င်းလို လူမျိုးတွေ ။ ရှိနေပါသေးတယ် သူတို့ လို စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး ရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေ ရှိနေကြပါတယ်
23 Aug 07, 16:08
Ko Zan: ဘာထူးပါသေးလဲ ခင်ဗျား...
Ko Zan: ကိုပြောင်းလဲလိုသူ ရောက်ပြီလားခင်ဗျာ...
23 Aug 07, 16:07
shwe zin yaw: ဒီလောက်ပါဘဲ နောက်များမှ ထပ်တွေ့ပါအုန်းမယ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ပြည်တွင်း ကသတင်းလေးတွေ တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်
23 Aug 07, 16:06
shwe zin yaw: ရဲရဲတောက် ခံယူချက်တွေနဲ့ ဒီနေ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တွန်းလှန်ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆွဲဆောင်စည်းရုံး လမ်းဖွင့် ကြိုဆို ပြင်ဆင်တွက်ဆ ဖို့ ရွှေညီအကို မျိုးချစ်မြန်မာတို့ စိတ်ကူးမိကြပါရဲ့လား ခင်ဗျား
Ko Zan: ကိုစိတ်ဓါတ် http://synrg3.multiply.com/video/item/14
James: Corrupted government accusing others of corruption and punishing others. That is SPDC. Hypocrites ! These shameless guys should burn in hell forever !
23 Aug 07, 16:05
shwe zin yaw: တသွေးတသံ တမိန့် စနစ်အောက်မှာ ပြားပြားမှောက် ဒုက္ခရောက်နေရရှာတဲ့ ရိုးသား ဆင်းရဲရှာသူ ပြည်သူလူထုဘက်ကို ကူးပြောင်းကာကွယ်လိုသူ ပြည်သူ့သားချင်း စစ်သားတွေ မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေကို ပြည်သူနဲ့ တစိတ်ထဲ တ၀မ်းထဲ
23 Aug 07, 16:04
shwe zin yaw:ွထွေ အကျပ်အတည်းကို ဖေါက်ထွက်နိုင်ဖို့ တခုထည်းသေား နည်းလမ်းက။ ပြည်သူရော ။ ကျောင်းသား။ အလုပ်သမားလယ်သမားရော။ ရဟန်းတွေရော မကျန် စုစည်းညီညွတ်နေယုံ တခုနဲ့တင် မရပါ၊
23 Aug 07, 16:03
shwe zin yaw: ကဲ ကျနော် လက်လည်း နည်းနည်းညောင်းပါပြီ။ ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ အထွေထေ
23 Aug 07, 16:02
shwe zin yaw: ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပြပြီး ငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ်၊
23 Aug 07, 16:01
shwe zin yaw: ပြည်သူကို ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ဖြူစင်တဲ့ လိပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စစ်သား။ စစ်ဗိုလ်။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ ဘယ်သူမဆို ကျနော်တင်ပြတဲ့ အချက်လက်တွေကို ငြင်းဆိုချင်ရင်
MM88: ကိုရွှေဇင်ယော်ရေ...သူတို့က ဗိုက်ဝအောင်စားထားတော့ ဘာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှ မလိုချင်ကြဘူးဗျာ
23 Aug 07, 10:11
23 Aug 07, 10:10
llll: အ၀ိစီအောက်ဆုံး ရောက်ဦးမည့် အာဏာရူး စစ်အစိုးရပါ ငနာ....
llll: သေရင်လည်း ခွေးသေသေမှာသေချာ
llll: သူ့အကျင့်ယုတ်ဟာ ထင်ရှားလှတာ
llll: ခွေးလောက်တောင် ကျေးဇူးမသိတာ စစ်အစိုးရပါ
llll: တိရိစ္ဆာန်တောင်မှ ကျေးဇူးသိတာ
llll: လူလိုအသိဥာဏ်ရှိမှ လူကိုသိတာပါ
23 Aug 07, 10:08
llll: အကြမ်းဖက်ကာ ခွေးစိတ်ဝင်စရာမလိုပါ
llll: ပြည်သူကိုချစ်ရင် ပြည်သူကိုလေးစားပါ
သြဂုတ်မိုး: အရင်က ၁၀၀ နှုန်းကို ၅၀ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း မှာလည်းပါတယ်။
myomyintaung: ကားခတွေ ဘယ်လောက်အထိလျှော့ချပေးလိုက်လဲ
23 Aug 07, 09:57
myomyintaung: စာတွေက ဘာဖြစ်လို့ အော်တိုမတက်တာလဲမသိဘူး
23 Aug 07, 09:48
သြဂုတ်မိုး: ဒီနေ့ ကားခတွေ ပြန်လျော့ပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ ဆီဈေးတွေက ပြန်မကျသေးတော့ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကု သလိုဖြစ်နေသေးတယ်။ လူတွေအကုန်လုံးက ညစ်နေကြတော့ လုယှက်မှုတွေ ရာဇ၀တ်မှုတွေများလာဖို့ လည်းများတယ်။
23 Aug 07, 09:40
myomyintaung: သြဂုတ်မိုးရေး ကျေးဇူပါနော်
23 Aug 07, 09:36
23 Aug 07, 09:32
သြဂုတ်မိုး: တာမွေပလာဇာဘက်မှာ လုပ်မယ်လို့ ကြားတာပဲ။
23 Aug 07, 09:25
23 Aug 07, 09:24
myomyintaung: မနက်ဖြန်မှာ ဆန္ခပြပွဲရှိသေးလား
23 Aug 07, 09:21
TTT: ကိုက်အတွက်ဆိုရင် တ်ုငးပြည်အတွက်လုပ်ပြီး ညါမနေနဲ့
23 Aug 07, 09:20
TTT: တုင်းပြည်အတါက်ဆိုရင် တိုင်းညပည်အတွက်လုပ်ပါ
23 Aug 07, 09:17
TTT: ဘုရားတရားကို ကိုယ်သေမျာကြောက်လိုကလုပ်တဲ့ ကြောင်သုတော်ကြွက်သုခိုးအစိုးရဖြုတ်ချ.........
23 Aug 07, 09:16
TTT: စည်းစိမ်ချမ်းစာတွေ သေရာပါမယ်ထင်တဲ့ တတ်ထိအစိုးရ ဖြုတ်ချ
23 Aug 07, 09:14
TTT: အမည်ခ့ဗန်းပျလုပ်နေတဲ့ လူလိမ်အစိုးရ ဖြုတ်ချ.....
23 Aug 07, 09:13
TTT: အာဏာကိုတွယ်ကပ်နေတဲ့ တောက်တဲ့အစိုးရ ဗြုတ်ချ....
23 Aug 07, 09:12
TTT: လူသတ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချ
23 Aug 07, 09:11
TTT: အူကြောင်ကြောင်အစိုးရကို ဖြုတ်ချ.............................
23 Aug 07, 09:10
TTT: တိုင်းပြည်အတါက်ဆိုပြိး အမျိုါ်ကြိးပွားအောင်လုပ်နေပါလား ရှက်ပါ့ဗျာ
Ko Zan: လုပ်ပါဦး ဟီးရိုးလပ်ဗ်ခင်ဗျား...
23 Aug 07, 09:07
TTT: မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကါယ်ရာမရှိ ကိုယ်ကအမြစ်ကိုယ်သိသင့်ဘီ စစ်အစိုးရရေ
Ko Zan: ဟုတ်တယ်ဗျို့... အသေဆိုးနဲ့ကို သေမှာ စိတ်ချ
Ko Zan: အိုင်ပီတွေကလည်း များလိုက်တာ...
23 Aug 07, 09:06
TTT: လူမဆန်တဲ့ စစ်အစိုးရ လူသေမသေ ခွေးသေသေမှာပါ
Ko Zan: လိုရာတော့ ဆွဲမခေါ်ကြေးနော်... ဟဲ ဟဲ
Ko Zan: ချဗျို့... ပြည်သူ့အသံပဲ... ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ပဲ....
23 Aug 07, 09:04
TTT: အကြမ်းဖက်နည်းဘဲတတ်တယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်တစ်ခုကို မအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးလို့ ၀န်ခံစ်းပါ စစ်အစိုးရရာ
23 Aug 07, 09:03
Ko Zan: ကျနော် အိုင်ပီတော့ အမြဲချက်ပါတယ် ခင်ဗျား...
Ko Zan: မနက်ဖြန် ကြားသမျှသတင်းလေးတွေ ကျနော်တို့ကို မျှဝေနိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား...
23 Aug 07, 09:02
Ko Zan: လေးစားလျှက်ပါ ဟီးရိုးလပ်ဗ် ခင်ဗျား....
TTT: အာဏာပေးထားတာက မကောင်းတာတွေမလုပ်အောင်တားဆိးဖို့ ကိုယ်ကိုတိုင် မဟုတ်တာလုပ်နေဖို့မဟုတ်
23 Aug 07, 09:00
herolove: တစ်နေ့နေ့ ကျရင်တော့ ကျရာနေရာကနေ တိုင်းပြည်အတွက် ပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါ့မယ် ........
23 Aug 07, 08:59
herolove: လမ်းလျှောက်သူများအားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားစွာ အလေးပြုမိပါတယ်ဗျာ ... ကိုယ်က ပြည်တွင်းက ဆိုပေမယ့် သူတို့လောက်တော့ သတ္တိမရှိတာ အမှန်ပါဘဲ .. အဲဒီအတွက် ရှက်မိတယ်ဗျာ..
TTT: ငါအာဏာပိုင်ဘီ ငါလုပ်တာ အမှန်လုပ်လို့မရဘူး
23 Aug 07, 08:57
Ko Zan: ထောက်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ...
TTT: အစိုးရဟာ ပြည်သူအတွက် ပြည်သူက အစိုးရအတွက်မဟုတ်
23 Aug 07, 08:55
Ko Zan: ဟုတ်တယ်
23 Aug 07, 08:54
TTT: ကြီးပွားချင်ရင် စီးပွားရေးလုပ်ပါ အာဏာသုံးပြီး စီးပွားမရှာနဲ့
Ko Zan: ပြည်သူ့အစိုးရ တက်မယ်...
23 Aug 07, 08:53
Ko Zan: မုချ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရကျဆုံးရမယ်
Ko Zan: ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောတာပါခင်ဗျ ထင်ပြီး ဖြည့်စွက် နိုင်ပါသေးတယ်
23 Aug 07, 08:52
Ko Zan: ပြည်သူ၊ ကျောင်းသား၊ သံဃာဆိုတာ တွဲလျှက်ပါပဲ ခင်ဗျ...
Ko Zan: ပြည်သူလူထုဆိုတာကတော့ သူ့အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် အတွေ့အကြုံရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ ၆၂ ကနေ ၈၈၊ ၉၆၊ ၉၉ အထိပေါ့ ခင်ဗျာ..
23 Aug 07, 08:50
TTT: စစ်အစိုးရကို ပြည်သူတွေရဲ့စည်းလုံးမှုနဲ့ဘဲ ဖြုတ်ချနိုင်မယ်
23 Aug 07, 08:49
^_^: hey kaung peacock so toe lu min ka bar lae nha phat chune...dar so min ka ladyboy pop...
TTT: ပြည်သူတွေ မစည်းလုံးရင် ခံရမယ်
23 Aug 07, 08:47
Ko Zan: စစ်တပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း စစ်တပ်အတိုင်းရှိစေချင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် မဖြစ်စေချင်ပါ ခင်ဗျား...
TTT: အာဏာကို အသုံးပြုပြီး ကြီးပွားဖို့လုပ်တာ အစိုးရမဟုတ်
23 Aug 07, 08:45
Ko Zan: စစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရန် ကာကွယ်ဖို့ပါ။ လူမျိုးစုအချင်းချင်း စစ်မဖြစ်စေချင်ပါ။
jjj: ဘယ်လိုလဲပီးကော့ နာမည်ကိုယူသုံးထားတဲ့ လူ အခြေနေ
23 Aug 07, 08:43
TTT: အစိုါ်ရဆိုတာ ပြည်သူကို လုပ်ကျွေးဖို့
Ko Zan: အဲဒီ ပီးကော့ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဆက်မသုံးစေချင်ပါ။
Ko Zan: ခင်ဗျား ဘာပြောချင်ပါသေးလဲခင်ဗျား အများသိအောင်တော့ နအဖ ဘက်လို့တော့ ပြောခဲ့ပါ။
Ko Zan: ကျနော်တို့ ဘက်စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော့်လိပ်စာ ပေးထားပါတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ
23 Aug 07, 08:41
Ko Zan: ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလဲ ရှေ့မှာ အဲဒီလို ဘာလို့ရေးထားလည်း
23 Aug 07, 08:40
Ko Zan: ပီးကော့ရေးထားတာ အိုဒါပို့ကနေ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား...
23 Aug 07, 08:38
Ko Zan: အိုကေ ပီးကော... နောက်ဆုံးမေးချင်းပါ... ခင်ဗျား နှစ်ဖက်ချွန်လုပ်နေတယ် ခင်ဗျား ဘယ်သူလည်း အောက်မှာရေထားတာတွေကော မှတ်မိသေးရဲ့လား ကျနော် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
23 Aug 07, 08:36
jjj: ခင်ဗျားကြောက်သွားပြီးလားကြောက်ရင်နောက်ပီးကော့ဆိုတဲ့နာမည်မသုံးပါနဲ့ 
23 Aug 07, 08:34
^_^: Peacock min Kyauk nay pi lar bya
23 Aug 07, 08:32
TTT: အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူကို သတ်ဖို့မဟုတ် ညှင်းဖို့ မဟုတ်
Ko Zan: အကုန်လုံးဖတ်နေတာပါ.. ခင်ဗျ
Ko Zan: ခင်ဗျား...က မီးကော့... နှစ်ဘက် ချွန်မလုပ်ပါနဲ့ ကျနော် အက်မင်လုပ်နေတာပါ
Ko Zan: Peacock I think u r alot drunk alc ...
23 Aug 07, 08:29
TTT: Army gourverment will be dying
23 Aug 07, 08:28
Ko Zan: ကို ဂျေသုံးလုံးရေ... စိတ်ရှည်ပါ...ခင်ဗျ
jjj: မင်းဘာကောင်လဲငါဘာကောင်လဲလုပ်မနေနဲ့ အဖြေကရှင်းနေသားနဲ့ 
Ko Zan: အကုန်လုံး ပတ်ဆဲနေပါလား...
Ko Zan: ပီးကော့ ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလဲ
^_^: min ka bar lae.... min ko lee pae thin tal...
23 Aug 07, 08:23
^_^: hey kaung min ko min bar thin tal.....min bal mar nay lae so tar ko i thi tal naw...
23 Aug 07, 08:22
Ko Zan: ကိုပီးကော့ဆိုတဲ့ လူခင်ဗျား... ခင်ဗျား... တိုက်ခိုက်ချင်ရင် ကျနော်အီးမေးလ်လိပ်စကတော့ zanye@gmail.com
23 Aug 07, 08:20
Ko Zan: ဒါပေမယ့်ပြောချင်ရင် နာမည်အရင်းသုံးပါ...
Ko Zan: ပြောကြပါ လွတ်လွတ်လပ်ပေါ့...
TTT: swelling is not brave
23 Aug 07, 08:19
၀လုံး: ဟား... ဟား.... ဟာ...
၀လုံး: ငါလူသတ်တတ်တယ်ကွ... မင်းတို့လို အမိန့်မပေးလည်း ရန်သူဆိုရင် သတ်ပြီးသားကွ....
TTT: peakock we don't fear
23 Aug 07, 08:18
၀လုံး: မင်းလည်း ထမင်းဝအောင်စားထား... ငါလာခဲ့မယ်...
၀လုံး: ဟား ဟား... နာမည်လိမ်သုံးတဲ့ကောင် မိပြီ
TTT: peakock we are notawide beast like army gourverment
23 Aug 07, 08:17
Ko Zan: အဖျက်အမှောင့်ဆိုတာကတော့ ရှိတာပါပဲဗျာ။
^_^: hey kaung min tat ti shi yin real name ko tone bar lar...
23 Aug 07, 08:16
23 Aug 07, 08:15
Ko Zan: ကိုတီ၃ ရေ... ကျနော်တို့လည်း စိတ်ရှည်ပါတယ်။
23 Aug 07, 08:14
Ko Zan: ခင်ဗျား အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ မကောင်းပါ။
TTT: I never againt other in this room
Ko Zan: ခင်ဗျား ဘယ်မှာနေတာလည်း ဆိုတာ သိတယ်
23 Aug 07, 08:13
TTT: ko zan I only enter to write for Myanmar people
Ko Zan: အိုကေ... နာမည်ခံထားတဲ့ ပီးကော့....
Ko Zan: လူလည်းတိုက်ပါတယ် ၀ါဒအရကွဲရင်ပေါ့...
Ko Zan: ကိုဝလုံးရေ ကျနော်တို့က စစ်ဏာရှင်ကို မူအရတိုက်တာပါ ခင်ဗျ
23 Aug 07, 08:11
၀လုံး: ဟား... ဟား....
၀လုံး: ဒုတိယ သတ်ရမယ့်ကောင်က မင်းပဲ...ကွ နီးရင်လာသတ်မယ်....
Ko Zan: သူတို့က အဖျက်အမှောင့် သိပ့်လုပ်လွန်းလို့ပါ ခင်ဗျား...
23 Aug 07, 08:09
Ko Zan: စိတ်လျော့ကျပါ ခင်ဗျာ... နအဖ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်ပါ
23 Aug 07, 08:08
၀လုံး: နေ၀င်း... ပြီးရင် မင်းပဲ.... မဆဲပါနဲ့
၀လုံး: ပီးကော့ဆိုပြီးနာမည်သုံးတဲ့ကောင် မင်းလည်းလာခဲ့...
23 Aug 07, 05:39
MScholar: မြန်မာကွ...တစ်ယောက်က စ တီးကြည့်..တစ်ယောက် တစ်လက် ၀ိုင်း ဘေ ကြပါလိမ့်မယ်..ဒီ..ကြံ့ဖွံသော ဘာသော..ခံ့နိုင်ရိုးလား...
23 Aug 07, 05:35
MScholar: အခွင့်သာခိုက်မှ မ Fight ချင်ရင်..အမိုက် နင့်အပြင်ရှိသေးလိမ့်လား....လို့ပြောရတော့မှာပဲ..
23 Aug 07, 05:32
MScholar: ဆရာ ဘိုကျော်ငြိမ်း ဆောင်းပါးတွေ ပြန်ဖတ်ကြဟေ့...Strategy လိုတယ်...
23 Aug 07, 05:31
MScholar: နှစ်မျိုးစလုံး ရင်းရမယ်ဟေ့....
23 Aug 07, 05:30
telesoe: ငုတ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆီက ဒီရက်အတွင်း မက်ဆေ့ ခ်ျတခုပေါ်လာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်၊
23 Aug 07, 05:29
telesoe: ခေါင်းဆောင်နိုင်သူတွေကိုသူတို့ က ကြိုဆွဲလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ဆွဲမယ်ဆိုတာသိတဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်သူတွေက တခုခုတော့ကြိုတင်စီစသ်ထားမှာပါ။ စောင့်ကြည့်
23 Aug 07, 05:25
MScholar: အဲဒီလိုဦးတည်သွားဖို့ ခေါင်းဆောင်နိုင်သူလိုတယ်...
23 Aug 07, 05:23
MScholar: ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ မီးမသေစေချင်ဘူး...ဒီမီးပွားကနေ အခြေအနေကြီး တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားရေး ဦးတည်သွားသင့်တယ်...
23 Aug 07, 05:02
ခင်မင်းဇော်: ပီးကော့ မဆဲပါနဲ့ လာဖတ်လာရေးနေတဲ့သူတွေကို အားနာပါလေးစားပါ
23 Aug 07, 04:46
ခင်မင်းဇော်: တော်လှန်ရေးဆိုတာ ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲအောင် လုပ်လို့ မရတာကို ဆင်ခြင်ပြီး ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေကို အားစိုက်လုပ်ကြရမှာပါ
23 Aug 07, 04:45
ခင်မင်းဇော်: ကျောင်းသားတွေကပဲ ရှေ့ ကရင်းပြခဲ့ရပါတယ် ဒါကို သင်ခန်းစာ ယူပြီးစိတ်ရှည်ကြပါ။
ခင်မင်းဇော်: အားလုံးသို့ စိတ်မလောကြပါနဲ့။ ၈၇ ပိုက်ဆံကိစ္စ ကျေညာချိန်နဲ့ မတ်လ ဖုန်းမော်နေ့ ကွာခြားချိန်၊ မတ်လ ၊ ဇွန်လ၊ နောက် ၈လေးလုံးဖြစ်ဖို့ အချိန်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ပြည်သူတွေက အရင်ပါမလာသေးပါဘူး၊
23 Aug 07, 04:43
FREEMYANMARVCD: http://www.freemyanmarvcd.com/talk.php မှာ ၀င်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်.. (မယဉ်ကျေးသူများ.. ဘန်းခံရမည်)
23 Aug 07, 04:41
ခင်မင်းဇော်: ဒီပီးကော့က အတုလို့ ပီးကော့ အစစ်က ကျမကို လာပြောထားပါတယ်။ မိုက်ရိုင်းတဲ့ ပီးကော့ကို ဘန်းသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးသင့်ပါတယ်။
23 Aug 07, 04:27
စိတ်ဓါတ်: မကွေးက ကျောင်းတွေမှာ ခွပ်ဒေါင်းပုံနဲ.စာတွေဝေ၊ ကျောင်းသားသမဂပြန်တည်ခွင့်ပေးဖို.တောင်း
23 Aug 07, 04:20
dennis n.win: ဒီ Site လေးကို ကြည့်ပြီး သတင်းစုံ တွေရတာကြောင့် အလွန်ကျေးဇူးတင်။ပါတယ်ဗျာ .. ခေါင်းဆောင်ပြီး လှုပ်ရှားမယ့်လူတွေ တော်တော်လိုနေသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်.... ကျောင်းသာတွေပါပါအောင် လှုံ့ဆော်ပေးကြပါ...
23 Aug 07, 03:46
Freedom From Fear: Pls visit our group and share you vids with us. thx
23 Aug 07, 03:32
သာဟိ: အရေးကြီးပြီညီနောင်အပေါင်းတို့သွေးစည်းကာညီစေညီကြဆို့ 
23 Aug 07, 03:29
စိတ်ဓါတ်: သံဃာတကသိုလ်တွင် ဖိနှိပ်မှုများ ကန်.သတ်မှုများ ဖယ်ရှားရန် အပါး ၁၀၀ ခန်.က တောင်းဆို
23 Aug 07, 03:27
23 Aug 07, 03:24
winaungkhaing: we walk together to the target.
23 Aug 07, 03:23
david: i wnat to participate
23 Aug 07, 02:42
23 Aug 07, 02:37
23 Aug 07, 02:34
23 Aug 07, 02:32
h: link lay 1 sate lout ma sa par khin byar
23 Aug 07, 02:26
23 Aug 07, 02:23
Moe: h: ရေ ဒီဘလော့မှာ လူမရှိဘူ မမေငြိမ်းဘက်လာခဲ့
23 Aug 07, 02:22
23 Aug 07, 02:14
Moe: ဒီအထဲမှာ အလုပ်သမားတွေရော အကုန်မပါသေးဘူး ခင်ဗျာ။ ကျောင်းသားတွေပဲ တော်တော်များတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကျနော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
Moe: ရှိသလောက်လေးနဲ့ ရအောင် လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လူထုကလည်း သိပ်အများကြီး အဟုတ်ဘူး။ ၁၅ ယောက် ၂၀ ယောက်လောက်ပဲ ခင်ဗျာ။
Moe: ပြီးတော့ ရဲတွေက ကျနော်တို့ကို အတင်း ပြန်လွတ်လိုက်တယ် ခင်ဗျာ။ သံရုံး ရှေ့မှာတော့ နည်းနည်းလေး လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်အောင် မြင်မြင်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော။် ဒါပေမဲ့ အောင်တော့ အောင်မြင်ပါတယ်။ ရှ
23 Aug 07, 02:13
Moe: အခြေအနေကတော့ ရဲကားနှစ်စီး ရောက်လာတယ်။ ရဲ ၁၀ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကို သက်သေခံ ကဒ်ပြားနံပါတ်တွေ တောင်းတယ်။ ကျောင်းတွေ မေးတယ်။ နေရပ် လိပ်စာတွေ မေးတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ အသေးစိတ် မေးတယ်။ ပြီးတော့ ရဲေ
Moe: ဆန္ဒပြသူတဦးနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်
Moe: Mizzima မှာရေးထားတယ်
23 Aug 07, 02:12
Moe: ကျနော်တို့ အယောက် ၂၀ -၃၀ ရှိလောက်ပြီ။ ကျနော်တို့ အခွန်နှစ်ထပ် ဆောင်တဲ့ ကိစ္စကို အရင်ဆုံး ကြွေးကြော်နေလို့ စီစဉ်ထားပါပဲ ခင်ဗျာ။ အခုတော့ ဒီစင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာတွေ အကုန်လုံးကို ကျနော်တို့ သတင်းတွေတော့
23 Aug 07, 02:11
စိတ်ဓါတ်: ဒါကိုမသိသူ ခွေးများမှာအဖို.တော့
စိတ်ဓါတ်: ပြီးရင် နိုင်ငံတကာက ရှင်းခိုင်းရင် ချကျွေးမှာပါ
23 Aug 07, 02:09
စိတ်ဓါတ်: သြဂုတ်မိုးမှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ. ရှုးတိုက်နေတာပါ။
သြဂုတ်မိုး: တရုတ်က နိုင်ငံတကာတပ်လွှတ်ဖို့ ထောက်ခံမဲ အရင်လ ကပေးခဲ့ရတယ်။
23 Aug 07, 02:08
စိတ်ဓါတ်: ကျွန်တော့ အမြင်ပေါ့နော်။ လူစုနေကြတယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို.လူစုလို. အင်အားမကောင်းတာနဲ. မလုပ်သေးတာပါ။ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေကို မြန်မြန်ပြန်လွှတ်ပါစေ
သြဂုတ်မိုး: အခုအချိန်မှာ ၈၈ တုန်းကလို ပစ်လို့မရတော့ဘူး။ ပစ်လို့ သွေးထွက်သံယို အကြီးအကျယ်ဖြစ်ရင် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ခေါ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တရုတ်ကလဲ ကန့်ကွက်လို့မရတော့ပါ။ ဆူဒန်ကိစ်စမှာတောင်
23 Aug 07, 02:07
စိတ်ဓါတ်: ယူအက်စ်မှာ ဆန်ဒပြနေပါတယ်တဲ့ ဟုတ်ပါသလားဗျို.
23 Aug 07, 02:06
Moe: နဲနဲချင်းပါလာတာထက် အုပ်စုလိုက်အများကြီးပါမှဖြစ်မယ်
23 Aug 07, 02:05
Moe: လူထုတွေ အင်နဲ့အားနဲ့တပြိုင်နက်ပါစေချင်တယ်
Moe: အခုဟာက လူတွေအရမ်းကြောက်တာလဲပါမယ် အဓိကက စားဝတ်နေရေးကြောင့်ဖြစ်နေတာ
23 Aug 07, 02:04
သြဂုတ်မိုး: ဒို့အရေးဆိုတာနဲ့ လူတွေက ပါပြီးသားပဲ။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေချီတက်လာတာနဲ့ ယန်းတယားတွေ အကုန်ရပ်ဖြစ်ကုန်တာ။ လူထုလှုပ်ရှားမှုက အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကို ရပ်အောင်လုပ်နိုင်မှ ထိရောက်တာ။
သြဂုတ်မိုး: ၂၂ ရက်နေ့နဲ့ ဒီနေ့မှာ ဖြစ်တာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သိပ်ပြီးသိပ်တော့ အားမရသေးပါ။ လူထုက ဆန်ဒပြတဲ့လူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ အဆင့်မရောက်သေးဘူး။ တနင်္ဂနွေနေ့ ကလို ကဆိုရင်တော့ အားရဖို့ကောင်းတယ်။ ၈၈ တုန်းကတော့
23 Aug 07, 02:01
Moe: မမေငြိမ်း ဘလော့မှာတော့ ခင်မောင်ထွန်းဆိုတဲ့တယောက် ဖွနေတယ်
23 Aug 07, 02:00
Moe: ဘာသတင်းမှ ထူးထူးခြားခြားမကြားမိသေးဘူး
23 Aug 07, 01:59
koyinaaw: သတင်းရှိရင်ပေးကြပါဗျာ ... တစ်ချို့စကားတွေက ချက်မှာပြောတာ လုံခြုံပါတယ်။
23 Aug 07, 01:56
Moe: ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ ၀က်ဆိုက်ထဲတောင် ကြေငြာတယ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးသံသယဖြစ်နေတာ
23 Aug 07, 01:54
စိတ်ဓါတ်: ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ရေးပြီး လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေကတည်းက စဉ်းစားမိသား
စိတ်ဓါတ်: ရေနံချောင်းမှာ လူ ၆၀ လောက် မနက် ၈ နာရီကနေ ၁၂ နာရီထိ လမ်းလျှောက်တယ်ဗျာ။
Moe: ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဟာကို လှည့်ကွက်လို့ထင်တာပဲ
စိတ်ဓါတ်: ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ပြန်လွှတ်ပေးအောင် အကြီးအကျယ်မလုပ်တာလားလို. ထင်စရာပါ
Min Mon: တခြားနယ်တွေမှာကော ဘာဖြစ်သေးလဲ
Moe: တကယ်တော့ ဒုတိယမြို့တော် မှာလဲ လှုပ်ရှားသင့်ပြီနော်
စိတ်ဓါတ်: ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ. ဘာမှ မဖြစ်လိုက်ပါဘူး
Moe: မန္တလေးသတင်းလဲ သိချင်တယ်
Min Mon: မန်းတလေးမှာ ဘာဖြစ်သေးလဲ
Min Mon: ကိုစိတ်ဓာတ် နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေ ပြောပါအုံး
Moe: အိုကေ ကိုစိတ်ဓာတ်
23 Aug 07, 01:48
စိတ်ဓါတ်: သတိ။ မမေငြိမ်းဘလော့ဂ်မှ ကိုခင်မောင်သိန်းဆိုသူ ပြောတာတွေ မယုံပါနဲ. ဖွသတင်းတွေပါ
FREEMYANMARVCD: http://www.freemyanmarvcd.com/talk.php မှာ forum လုပ်ပေးထားပါတယ်.. အဲဒီမှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်: သူက ဘာမှမသိပါဘူး။ ကိုအောင်မော်ရာ။ ပြည်ပကနေပြီး ပြည်တွင်းကလူတွေ ဟိုလိုမလုပ်ရကောင်းလား ဆိုပြီးထိုင်ဆဲနေတာ။ အစိုးရအလိုတော်ရိပဲထင်ပါရဲါ
23 Aug 07, 01:46
သြဂုတ်မိုး: ကိုးထပ်ကြီးမှာ ဘုန်းကြီးတွေ ဆန်ဒပြနေကြတယ်လို့ ကြားတယ်။ သတင်းဌာနတွေမှာတော့ မတွေ့ သေးဘူး
စိတ်ဓါတ်: အစိုးရအလိုတော်ရိ လောက်ကောင်ပါ
အောင်မော်။: mgပြောတာကောင်းပါတယ် ကျါန်တော်ပြည်တွင်းကပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပါ
စိတ်ဓါတ်: ကိုမိုးရေ။ အဲဒီ့ ခင်မောင်ထွန်းက အလကားဖွနေတာ
23 Aug 07, 01:45
Moe: မေငြိမ်း ဘလော့မှာေ၇းထားတယ်
Moe: ဒေါပုံ မြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် တွေမှာ ရဲတွေ၊ ရoတတွေ ပိတ်ရှာနေ ကြတယ် ဆိုပဲ
Moe: ဒီပဲရင်းအရေးအခင်းတုန်းက အန်တီစုကိုရိုက်ခိုင်းတာသူပဲ
23 Aug 07, 01:44
စိတ်ဓါတ်: အဲဒီ့ ငနဲက ဒီပဲရင်းတုန်းက အမိန်.ပေးတာနော်။ အခုတော့ ရောဂါရနေပြီပြောတာပဲ
Moe: ဟုတ်တယ် peacock ရဲ့ပြောပါအုံး
23 Aug 07, 01:43
စိတ်ဓါတ်: ဘယနေရာက ဒေါက်တာဘွဲ.ပေးလိုက်တာတုန်း ပီးကောက်ရဲ.
23 Aug 07, 01:40
peacock: မှန်တယ်အမ မခင်မင်းဇော်
23 Aug 07, 01:39
ခင်မင်းဇော်: ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်မှန်က စာအုပ်တောင်ထွက်ထားပြီးသား
peacock: ဝန်ကြီးချုပ် Drစိန်ဝင်းဘယ်ေ၇ာက်နေလဲ
23 Aug 07, 01:38
ခင်မင်းဇော်: အင်း မြန်မာ့အေ၇းကို တကယ်စိတ်ဝင်စားရင် MGရေ အပြောနဲ့ မရဘူး တကယ်လေ့လာကြည့်ပါ နိုင်ငံတကာကို အားကိုးမရဘူး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လုပ်ရမှာ ဆိုတာ သိလာရလိမ့်မယ်
23 Aug 07, 01:37
ခင်မင်းဇော်: ဒီပဲယင်းက တကယ် အရိုက်ခံထားရတဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ဖို့ လုပ်နေတာ၊ တိုင်ကြားထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အင်း အဲဒါကို မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာများလား
23 Aug 07, 01:36
peacock: မဲပေးခဲ.တဲ.လူထုကိုလဲကြည်.ဦး။အန်တီစုရေ လူရွေးမှားခဲ.ပီ်
23 Aug 07, 01:33
23 Aug 07, 01:31
peacock: ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော.သန်းရွှေမောင်အေးတို.က လီးယားရင် NLD ကEC CEC တွေကိုခေါ်ပီး၇က်ခိုင်းလိမ်.မယ်
23 Aug 07, 01:30
MG: အခုလောလောဆယ်မှာ ...ရပ်နေတဲ့လူတွေများပါတယ်...ဘာလုပ်ရမလဲ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်..ကျုပ်..ပြန်ပြီဗျ..
23 Aug 07, 01:29
စိတ်ဓါတ်: မြေနီကုန်း၊ နှင့် လှည်းတန်းတို.တွင် သတင်းများကြားရ။ မှန်မမှန် အတည်ပြုပေးကြပါဦ။
MG: အဲဒီ ဒီပဲယင်းက မပြီးသေးဘူးဗျ...အခုပြန်စလိုက်ပါပြီ
23 Aug 07, 01:28စိတ်ဓါတ်: ဟုတ်ကဲ ကို မန်ဂျီရေ .. တကယ်ဖြစ်တာက အင်တာနေရှင်နယ်တရားရုံး ကိုတက်ဖို. သက်သေမခိုင်မာလို. တက်မရတာပါ။ နာမည်ကြီးမြန်မာရှေ့နေတစ်ယောက် ပြောပြချက်ပါ
23 Aug 07, 01:28peacock: လီးခေါင်းဆောင်တွေလား ရောဂါသယ်စုစုနွေးကိုအားနာဦး
23 Aug 07, 01:27MG: သေဒဏ်ပေးလို့ ရတယ်...ဒါဟာအမှန်တရားဆိတာ...ပြထားပြီးပြီ။ ကမ်ဘာကလုပ်ပြပြီးပြီ။
23 Aug 07, 01:26MG: င်ြမးချမ်းစွာဆန်ဒပြသူကို သွေးထွက်အောင်ရိုက်ခဲ့ရင်...အင်တာနေရှင်နယ်တရားရုံးမှာ တရားစွဲလို့ ရတယ်...အဲဒီအကြီးအကဲကို ဆင့်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်...မလာရင်..တပ်လွတ်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်...လူစုလူဝေးလိုက်လုပ်ကြံထားရင်
23 Aug 07, 01:25koyinaaw: မြေနီကုန်းမှာ သတင်းနည်းနည်းကြားတယ် လက်လှမ်းမှီရာ စုံစမ်းပေးကြပါ။
23 Aug 07, 01:24စိတ်ဓါတ်: မြန်မာပြည်အကြောင်းသေချာမလေ့လာပဲနဲ့ ရမ်းမတုတ်ပါနဲ. တောင်းပန်ပါတယ်
23 Aug 07, 01:24စိတ်ဓါတ်: ကို MG ရေ ဒီပဲရင်းက ခင်ညွန်.နဲ့မဆိုင်ဘူး။ သန်းရွှေအမိန်.ပေးတာ။ လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် စိုးဝင်းက field command
23 Aug 07, 01:23MG: လူဆိုးလူမိုက်ဟာ ...မြောက်ပေးရင်..စည်းလွတ်ရိုက်တယ်..အဲဒီစည်းလွတ်မှာ က တတ်ဖို့ လိုတယ်...
23 Aug 07, 01:23peacock: လူထုရှေ.ဆောင်လမ်းပြပါတီကဒီလိုအခြေအနေတွေမှာမပြတ်သားရဲဘူးလား?ဘာကိုစောင်.နေတာလဲ
23 Aug 07, 01:23သြဂုတ်မိုး: prices and falling living standards.
23 Aug 07, 01:22သြဂုတ်မိုး: Reuters) - A gang of supporters of Myanmar's military rulers broke upasmall protest march in Yangon on Thursday as the arrest of 13 top dissidents did little to quash public anger at soaring fuel
23 Aug 07, 01:22MG: ဒီပဲယင်းတုံးက ထောက်လှမ်းရေး(ခင်ညွန့်) အမှားလုပ်လိုက်တယ်..သူ့ လူတွေကို သူ မြန်ထိန်းမိရက်သားဖြစ်သွားတာ..
23 Aug 07, 01:22စိတ်ဓါတ်: .စွမ်းအားရှင်တွေက စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ လူဆိုးလူမိုက်တွေဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ.
23 Aug 07, 01:20MG: စစ်အုပ်စုအမှားဟာ သူံလူတွေအပေါ်မှာပဲဖြစ်မယ်..စွမ်းအားရှင်ဆိတာတွေက ..စံနစ်တကျစည်းရုံးလေ့ကျင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး..
23 Aug 07, 01:19MG: တနည်းနည်းနဲ့ ရှင်းမှာပဲ... အဲဒီအကွက်ထဲဝင်လို့ မရဘူး..
23 Aug 07, 01:19peacock: ကြေညာချက်လေးထုတ်တောင်းဆိုချက်လေးဖတ်ရုံနဲ.ကတော.စစ်အစိုးရကလီးကြားထဲတောင်ထည်.မှာမဟုတ်ဘူး။မလုပ်ရဲ၇င်လူငယ်တွေကိုလွှဲပေးလိုက်
23 Aug 07, 01:18ခင်မင်းဇော်: စစ်အုပ်စုအမှားကို ဘယ်လိုနင်းမလဲဆိုတာကိုသာ ဆွေးနွေးပေးကြပါ။ အထဲကသူတွေကို အားဖြည့်နိုင်ဖို့ပဲ အကြံတွေထုတ်ကြပါ
23 Aug 07, 01:18MG: ညီလာခံအပြီးမှာ NLD ရှိနေလို့ မရဘူး..အနိုင်ရပါတီရှိနေလို့ မရဘူး...ရှိနေရင်Road map ဒုတိယကို ဆက်သွားလိ့ မရဘူး..
23 Aug 07, 01:17ခင်မင်းဇော်: သူတို့တွေလည်း လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို လုပ်စရာတွေ ရှိပါတယ်
23 Aug 07, 01:17ခင်မင်းဇော်: ပီးကော့ရေ စေတနာနဲ့ပဲ ပြောပါ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပေါ့
23 Aug 07, 01:16MG: NLD ထွက်ရင် အသင့်စောင့်နေတဲ့အကွက်ထဲဝင်မှာပေါ့...ညီလာခံအပြီး ပါတီ မတရားအသင်းကြေငြာဖို့ ဒီအကွက်လုပ်လိုက်တာ
23 Aug 07, 01:14MG: ဆီဈေးတက်လိုက်တာက...စစ်အစိုးရဲ့ အကွက်...သိသိကြီးနဲ့လုပ်ပြတာ..
23 Aug 07, 01:14FREEMYANMARVCD: http://www.freemyanmarvcd.com/talk.php မှာ forum လုပ်ပေးထားပါတယ်.. အဲဒီမှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
23 Aug 07, 01:14စိတ်ဓါတ်: ဟုတ်ကဲ့ ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းနဲ. မဆိုင်ဘူး။
23 Aug 07, 01:14peacock: ဦးအောင်ရွှေ ဦးလွင် ဦးအုန်းသန်းရဲ ချီးသွားစား။ကြောက်ရင်လီးဖြတ်ပီးစောက်ပတ်တပ်လိုက်။မမီးမီး သေးနဲ.မျက်နှာသစ်လိုက်
23 Aug 07, 01:13MG: နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်အစိုးရ သူနဲ့စကားပြောရတယ်..
23 Aug 07, 01:13MG: ဂနီကြီးဟာ အခလို နိုင်ငံအနှံ့ ဆန်ဒပြပွဲတွေ လုပ်စေတယ်၊ ရပ်ပြတယ်..မရပ်ရင်သူကိုယ်တိင်အစာငတ်ခံဆန်ဒပြပြီးရပ်ရတယ်...
23 Aug 07, 01:13;: ......
23 Aug 07, 01:11peacock: NLD ဘာလုပ်နေလဲ?ကြောက်လားလူထုရှေ.ကမနေရဲရင်ပါတီဖျက်လိုက်တော.
23 Aug 07, 01:10စိတ်ဓါတ်: အလားတူဖြစ်ရပ်တွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြိုနယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပုဇွန်တောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ ဒဂုံ၊ လမ်းမတော်၊ ကြည်မြင့်တိုင်၊ အလုံ၊ လှိုင်၊ ဒေါပုံအစရှိတဲ့ မြိုနယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
23 Aug 07, 01:09စိတ်ဓါတ်: ကမာရွတ် အထက၅မှ အထက်တန်း ကျောင်းသားတစ်ဦး ဦးဆောင်ပြီး ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး ဆိုင်းဘုတ်ကို အခုပဲ ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်
23 Aug 07, 01:08စိတ်ဓါတ်: မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင်က ဈေးချိုနာရီစင်နား တ၀ိုက်မှာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ ကြွေးကြော်သံများ၊ ဆန္ဒပြမှု များ ကြိုကြားဖြစ်နေ
23 Aug 07, 01:08zeRoTraSh: စင်ကာပူရောက် ကျောင်းသားများကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
23 Aug 07, 01:08MG: အမရိက အစိုးရ စာထုတ်ပေးမယ်..
23 Aug 07, 01:07ခင်မင်းဇော်: mg ဆရာကြီးဝင်လုပ်နေပါလား။ ခင်ဗျားရော ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ဘာလုပ်နေသလဲ
23 Aug 07, 01:07zeRoTraSh: မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင်က ဈေးချိုနာရီစင်နား တ၀ိုက်မှာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ ကြွေးကြော်သံများ၊ ဆန္ဒပြမှု များ ကြိုကြားဖြစ်နေ
23 Aug 07, 01:07MG: သံးရုံးတွေရှေ့မြန်မာတွေတွေရောက်အောင် လုပ်နေတယ်..
23 Aug 07, 01:07zeRoTraSh: စိတ်ဓါတ် ဒီဘက်မှာ လာကြည့်အုံး http://maynyane.cbox.ws/
23 Aug 07, 01:07boy: this' latest news
23 Aug 07, 01:07koyinaaw: ဂုဏ်ယူပါတယ် ... စင်္ကာပူက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ခင်ဗျာ ။
23 Aug 07, 01:06boy: ၁၅ ယောက် ၂၀ ယောက်လောက်ပဲ ခင်ဗျာ။ ဒီအထဲမှာ အလုပ်သမားတွေရော အကုန်မပါသေးဘူး ခင်ဗျာ။ ကျောင်းသားတွေပဲ တော်တော်များတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ကျနော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
23 Aug 07, 01:05boy: ဒါပေမဲ့ အောင်တော့ အောင်မြင်ပါတယ်။ ရှိသလောက်လေးနဲ့ ရအောင် လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လူထုကလည်း သိပ်အများကြီး အဟုတ်ဘူး
23 Aug 07, 01:05boy: သံရုံး ရှေ့မှာတော့ နည်းနည်းလေး လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်အောင် မြင်မြင်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော။်
23 Aug 07, 01:05boy: ကျောင်းတွေ မေးတယ်။ နေရပ် လိပ်စာတွေ မေးတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ အသေးစိတ် မေးတယ်။ ပြီးတော့ ရဲတွေက ကျနော်တို့ကို အတင်း ပြန်လွတ်လိုက်တယ် ခင်ဗျာ။
23 Aug 07, 01:05စိတ်ဓါတ်: ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါဦး။ ကောင်လေးရေ
23 Aug 07, 01:05boy: အခြေအနေကတော့ ရဲကားနှစ်စီး ရောက်လာတယ်။ ရဲ ၁၀ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကို သက်သေခံ ကဒ်ပြားနံပါတ်တွေ တောင်းတယ်။
23 Aug 07, 01:05MG: ကောင်းပြီ။ အဲဒီအသိစိတ်ဓါတ်ရှိရင်...နောက်အခါ ဘာလုပ်ရမလဲသိလိမ့်မယ်...
23 Aug 07, 01:05zeRoTraSh: နိုင်ငံရေးဟာ ပရိယာယ်များတယ်
23 Aug 07, 01:05ခင်မင်းဇော်: ကိုမောင်ဆိုတာ ကဒေါင်းဆီမှာ ၀င်ေ၇းနေတဲ့သူလား
23 Aug 07, 01:05စိတ်ဓါတ်: ကျန်တာ အကိုတို.လို အလကားနေ မလုပ်ရဲပဲ အော်နေသူတွေကို ဟားတိုက်ဖို.ပါပဲ
23 Aug 07, 01:05boy: ဆန္ဒပြသူတဦးနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်
23 Aug 07, 01:04boy: စင်္ကာပူ ဆန္ဒပြပွဲ အခြေအနေ
23 Aug 07, 01:04boy: 5:56 PM
23 Aug 07, 01:04zeRoTraSh: guys guys guys do not fight each ohter let's discuss
23 Aug 07, 01:04peacock: သန်းရွှေ မောင်အေး လီးပဲ
23 Aug 07, 01:04MG: စစ်တပ်ဟာ နောက်မှာထိုင်..ရုံးမှာထိုင်အလုပ်လုပ်နေတယ်...ရှေ့ မှာ စစ်တုရင်ရုပ်ကလေးတွေချထားတယ်...ကင်းနဲ့ကွင်း စားလိုက်ပြီ။ ကျန်တာ...ဘာလဲ..
23 Aug 07, 01:04ခင်မင်းဇော်: ဟုတ်ပြီ အဲဒီလူ ၆၀၀ ကို ဘယ်သူက သွားညှိမလဲ ဘယ်ကပိုက်ဆံနဲ့ သူတို့ကို စည်းရုံးမလဲ ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်းစားပေးပါ
23 Aug 07, 01:03စိတ်ဓါတ်:့ မြန်မာပြည်မှာလဲမရှိ။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒုတ်ခလဲနားမလည်။ မြန်မာပြည်သူတွေကို ရှုံချဖို.သာသိရင်။ မြန်မာပြည်ကောင်းစားတာ မြင်ချင်မနေပါနဲ.တော့
23 Aug 07, 01:03ခင်မင်းဇော်: အင်းလေ အပြင်ကနေ အထဲက လုပ်နေသူကို အပြစ်မပြောပဲ ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ ပဲ စဉ်းစားပေးဖို့ ကောင်းတယ်
23 Aug 07, 01:02MG: စတေးနေတဲ့သူတွေရှိရင်...နောက်က ထိုင်အလုပ်လုပ်ပေးရမဲ့ သူတွေလိုတယ်...အားလုံးမထွက်ရဘူး...ဒါဟာ စုစည်းမှုနဲ့စနစ်ကျတဲံအင်အားဖြစ်စေတယ်...
23 Aug 07, 01:02စိတ်ဓါတ်: အကို မြန်မာပြည်မှာ ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်
23 Aug 07, 01:01MG: အဲဒီလူ ၆၀၀ ဟာ ငွေလေးထောင်ပေးပြီးခေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ရင်...သူတို့ ကို သုံးလို့ ရတယ်..ဒါဟာ နိုင်ငံရေးပဲ..အိမ်လိုက်သွားပြီး ညှိရတယ်..ဒါဟာနိုင်ငံရေးပဲ..
23 Aug 07, 01:01စိတ်ဓါတ်: ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားရှိလို.ကော ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ နိုင်ငံတကာဆိုတာ လှအောင်ရေးထားတာပဲရှိတယ်။ သူတို.အကျို။အမြတ်မရှိရင် ဘာမှမလုပ်ဖူး
23 Aug 07, 01:009999: မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို လုံးဝအထင်မသေးပါဘူး...တကယ်ထိရောက်မယ့် နည်းလမ်းရှာသင့်တယ်လို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတာပါ...
23 Aug 07, 01:00peacock: အကုန်လုံးမသာပေါ်သွားစေရမယ်
23 Aug 07, 01:00စိတ်ဓါတ်: ကို MG ကို.ကို ရိုက်မဲ့ လူ ၆၀၀ ရှေ့မှာ အကိုရော ဓါတ်ပုံရိုက်ရဲလား။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ရိုက်တဲ့လူမှာ ဘယ်လောက်ထိ စွန်.စားပြီး ရိုက်ရသလဲ နားလည်ပါ
23 Aug 07, 00:59MG: ပြည်ပက ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမရရင် ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရဘူး..
23 Aug 07, 00:59စိတ်ဓါတ်: ကို MG ကို.ကို ရိုက်မဲ့ လူ ၆၀၀ ရှေ့မှာ အကိုရော ဓါတ်ပုံရိုက်ရဲလား။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ရိုက်တဲ့လူမှာ ဘယ်လောက်ထိ စွန်.စားပြီး ရိုက်ရသလဲ နားလည်ပါ
23 Aug 07, 00:58MG: အဲဒီ ဓါတ်ပုံရိုက်နေသူကို ဖမ်းသွားတာကို ဓါတ့်ုပြန်ရိုက်ခဲ့ရင်..နိုင်ငံတကာက သတင်းထောက်အဖွဲ့ ဘာလုပ်ပေးမယ်ထင်သလဲ..
23 Aug 07, 00:58သြဂုတ်မိုး: စစ်သားလည်း မွဲနေတာပဲ၊ အရပ်သားလဲမွဲနေတာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ချမ်းသာတာ လက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်။ ဒီတော့ တိုးတက်ဖို့အတွက် အပြောင်းအလဲလိုတယ်။ အပြောင်းအလဲမရှိရင် ပိုပြီး လူတွေလုံးပါးပါးလာကြမယ်
23 Aug 07, 00:58စိတ်ဓါတ်: မြို။ထဲထိ သွားဖို.လူစုလို. မရဘူးလေ။ ၀ိုင်းရိုက်နေတာကို။ ပြည်ပကနေပြီး မလုပ်နိုင်ပဲ မရှုံချပါနဲ။ အားပေးကြပါ
23 Aug 07, 00:58ခင်မင်းဇော်: ပိုမတန်ဘူးလား စဉ်းစားကြည့်တာပါ
23 Aug 07, 00:57zeRoTraSh: ကမာရွတ်မြို့နယ် အမှတ်(၅)အခြေခံပညာ အထက်တန်ကျောင်းသားတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ပြီး ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး ဆိုင်းဘုတ် ကို ကျောင်းဝင်းအတွင်းကနေ ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။
23 Aug 07, 00:57ခင်မင်းဇော်: မဟုတ်သေးဘူး တကိုယ်တော်ထက် သူက လူတစုကို ခေါင်းဆောင်နိုင်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား ဒါမဲ့ သူ့ကိုအပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ တရားဟောတာ စောင့်နေသူတွေကို သွားဟောပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရင်
23 Aug 07, 00:57MG: သူ့ ကို ရိုက်ခဲ့ရင်...ကြံ့ ဖွံ့ တွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ..ကမ်ဘာမြင်ကွင်းမှာ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ...
23 Aug 07, 00:56စိတ်ဓါတ်: ကို MG ကို.ကို ရိုက်မဲ့ လူ ၆၀၀ ရှေ့မှာ အကိုရော ဓါတ်ပုံရိုက်ရဲလား။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ရိုက်တဲ့လူမှာ ဘယ်လောက်ထိ စွန်.စားပြီး ရိုက်ရသလဲ နားလည်ပါ
23 Aug 07, 00:56MG: အဲဒီလို လပ်ရတယ်..သူ့ကို ဖမ်းသွားတာ သံရုံးကငမရာတွေမှာ ပေါ်စေတယ်။
23 Aug 07, 00:569999: အဲဒါတွေအတွက်ကြာဦးမယ်ပြောတာပါ
23 Aug 07, 00:569999: သူတို့လက်ကလွတ်အောင် ဒီစာတွေကို ဘယ်လိုရအောင်ဝေမလဲ...လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...အရည်အချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေ ဘယ်မှာလဲ...သူတို့ကို ဘယ်လို ယှဉ်မလဲ...
23 Aug 07, 00:55MG: ဦးအုန်းသန်းလုပ်တာ တခုထဲ..တယောက်ထဲက မှန်တယ်...
23 Aug 07, 00:55စိတ်ဓါတ်: ရန်ကုန်ကလူတွေ လုပ်ပေးနိုင်သလောက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ သူတို. အသက်ဖက်နဲ.ထုတ်ပြီးလဲ သတင်းတွေ ဝေပေးနေတယ်။
23 Aug 07, 00:54ခင်မင်းဇော်: ဟုတ်ရဲ့လား ၉၉၉၉ ခင်ဗျားက လူတွေကို အထင်သေးနေတာပါ လူတိုင်းနားလည်ပါတယ် သူတို့ကို အကြောက်တရား ကြီးစိုးနေလို့ပါ အဲဒီအတွက် ရင်းရဲတဲ့သူတွေ က ရင်းပြနေတာပါ
23 Aug 07, 00:54MG: စတေးရတာ မတန်ဘူး..
23 Aug 07, 00:549999: အင်း...အဲဒါတွေကို ပြောတာလေ...သူတို့က အကုန်ပိတ်လိုက်တယ်လေ...
23 Aug 07, 00:54MG: လူတွေ..မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေဓါတ်ပုံမရိုက်တတ်ဘူး..
23 Aug 07, 00:54စိတ်ဓါတ်: ၉၉၉၉ ရေ အချိန်မရတာဗျို.။ မှတ်မိသေးလား။ ဒီပဲရင်း နှစ်ပတ်လည်မှာ လူ.အခွင့်အရေးစာတမ်းတွေဝေလို. လူငယ် ၇ ဦးဖမ်းသွားတာ
23 Aug 07, 00:539999: ဒီတော့ ပြည်သူကလဲ လိုက်ပါတောင်းဆိုဖို့ ဆန္ဒပြင်းထန်သင့်သလောက် မပြင်းထန်တော့ဘူး
23 Aug 07, 00:53MG: ဓါတ်ပုံဟာ..ဆန်ဒပြရမဲ့သူတွေကို မရိုက်ရဘူး..
23 Aug 07, 00:52စိတ်ဓါတ်: ရန်ကုန်ကလူတွေ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို.မှာလဲ အကြံတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ စောင့်ကြည့်ကြပါဦး။
23 Aug 07, 00:529999: လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာမျိုးလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မရှင်းပြဘူး
23 Aug 07, 00:529999: တကယ်က လက်တွေ့ဆန်ရမယ်...လူတွေကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ကြပါ...ကြိုးစားကြပါ နှိုးဆော်တယ်...ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်သူမှ မရှင်းပြဘူး
23 Aug 07, 00:52MG: လိုသွားတာက..အချိန်ကိုက်..တိုးရစ်တွေ..နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာပြည်ထဲမောင်းသွင်းထားဖို့ ...အဲဒါလိုသွားတယ်..
23 Aug 07, 00:52စိတ်ဓါတ်: ကို mg လုပ်မှာတွေလား
23 Aug 07, 00:51MG: နောက်နှစ်မှာ လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်..
23 Aug 07, 00:51ခင်မင်းဇော်: လုပ်ဖြစ်မလား စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့
23 Aug 07, 00:51ခင်မင်းဇော်: နိုင်ငံရေးမှာ မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတယ်
22 Aug 07, 22:01tuntun: I respect those in Burma who show freedom of expression, and walking
22 Aug 07, 21:59Empress: ဟုတ်ကဲ့ပင်နင်ဆူလာကနေ သွားကြရင် ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်မလဲ တွေးနေမိတာ
22 Aug 07, 21:59meemee: taw taw myar lar
22 Aug 07, 21:58asdf: ko htin kyaw has just doneagreat trick . everyone thinks he's in ygn , then he came out in mandalay
22 Aug 07, 21:58yangon: hote tal meemee
22 Aug 07, 21:58meemee: phone gyi twe yaw par tal so (synda) pya tar
22 Aug 07, 21:58waso: best news for ko htin kyaw but worst news for u ohn than
22 Aug 07, 21:57myoag: I think city hall peninsula plaza is the best place to gather for all myanmar
22 Aug 07, 21:56Yangonthar: In front of U.S.A embassy, U ohn Than,aprominent individual was beaten and arrested by the juntas' thugs while demostrating peacefully.
22 Aug 07, 21:56naychi_thit: good news he is still outside
22 Aug 07, 21:55Pajama: Mingalarbar to everybody, Ko Htin Kyaw is now in Mandalay. He will start the peaceful marching at 1 pm from Phayargyi. To save our country from the hell, let's join him. Maung Myanmar
22 Aug 07, 21:55Empress: ဒီညနေ သွားဖို့ အတွက် စုရပ်က ဘယ်ကစထွက်မှာလဲ ဘယ်ကိုအရင်ဆုံးလာပြီးမှ သံရုံးရှေ့ ကို သွားရမှာလဲ ပြောကြပါဦး
22 Aug 07, 21:53myoag: if no choice,just gather in small group of not more than4and go there, dont give up just coz cant get permit
22 Aug 07, 21:52yangon: inndkg tway tay mha aye mhar pa
22 Aug 07, 21:50naychi_thit: hote mal nai tu tal .. downtown thwer mae bus tway arr lone nai tu tal
22 Aug 07, 21:50yangon: 33 tway lar?
22 Aug 07, 21:49littlenickky: sg mar lote mal so yin permit ya hma lote yin po kg mal lotl htin bar tal
22 Aug 07, 21:49martyr: can't*
22 Aug 07, 21:49martyr: some line ph can get connect
22 Aug 07, 21:49naychi_thit: bus car tway ko downtown htal pay ma thwer bu tae ... kyout kon paw hmar bus car 10 see lout yat hter ya tal
22 Aug 07, 21:49Smilemay: ကြိုးဖုန်းရသေးတယ်
22 Aug 07, 21:48martyr: ph line tway ma ya top pu pyaw tel
22 Aug 07, 21:47yangon: nyein nay kya lo
22 Aug 07, 21:47yangon: bar tway kyar tay lae byoo
22 Aug 07, 21:46mm: hi
22 Aug 07, 21:46SG Myanmar: လေးယောက်ထက် ပိုပြီး လျှောက်ဖို့ ပုလိပ်ထောက်ခံစာ လိုတယ်။ အိုးဝေပွဲတွေဟာလဲ ပုလိပ်ထောက်ခံစာနဲ့ လုပ်တာ။
22 Aug 07, 21:46yangon: hi mm
22 Aug 07, 21:46martyr: now i've heard some ph lines are cut out !
22 Aug 07, 21:46koaung: call to mm embassary5minatime and talk to free DASSK, MKN, KKG and others
22 Aug 07, 21:46mm: haveagood day
22 Aug 07, 21:46martyr: how about y'll ph lines ?
22 Aug 07, 21:45mm: hello
22 Aug 07, 21:45koaung: you can do phone campaign
22 Aug 07, 21:44mm: hi
22 Aug 07, 21:44someone.sg: the permit is not that fast to get it... and also not easy to apply
22 Aug 07, 21:43myoag: some leaders plz arrange,go and apply for permit...we need someone who can organize...otherwise this protest will be uneffective and invain
22 Aug 07, 21:43Empress: ဒီနေ့ညနေ စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးရှေ့ သွားဖို့ က ၄ယောက်ထက်ပိုပြီး တန်းစီလျှောက်လို့ မရဘူးလို့ ပြောတာလားဟင်
22 Aug 07, 21:41SG Myanmar: Hi KoYin Aww, for public gathering more than4people, we need police permit. Dear all, please do take note
22 Aug 07, 21:41Phoe Thar: what is the plan for protest infront of Embassy?
22 Aug 07, 21:40martyr: myoag: which sites can i read about situation?
22 Aug 07, 21:39naychi_thit: MM hmar office staff tway ko Monday & tursday ,blue & white uniform wit khine tar ko .. today wit ma lar kya pho .. yesterday ka hmar lite tal dae
22 Aug 07, 21:38myoag: mizzima site still down? any idea how to read news there?
22 Aug 07, 21:33ုkoyinaaw > myoag: အရှေ့ပိုင်းမှာ ပြောခဲ့ကြတာတော့ ၅ ယောက်အောက်ဆို ရမယ်လို့ သိရတယ် ..
22 Aug 07, 21:33min_koko: cheer all, now is time for us do or continue stay, but becareful they all are lu jan gyi taw
22 Aug 07, 21:33brighten_star: http://www.irrawaddy.org/headlines/BurmaProtests-Continue.php
22 Aug 07, 21:31myoag: cant we apply for permit for peaceful protest?
22 Aug 07, 21:31SG Myanmar: Hi.. According to Singapore Law, it is not allowed to gather more than4people for demonstration. I suggest you all group in4and walk to SG embassy If you want. Cheers!
22 Aug 07, 21:31myoag: can some myanmar in sg getapermit from sg government first b4 today 5pm gathering and protesting?
22 Aug 07, 21:30aaa: so what about when we go to club or gather to do school project , it's more than 10 people , that shouldn't be ture i think
22 Aug 07, 21:30arrluu: so how to do ?
22 Aug 07, 21:28myoag: I heard that sg government not allow people to gather more than 10 persons unless they get prior permission from government
22 Aug 07, 21:28naychi_thit: http://www.freewebs.com/khayan_pyar_romance/06%20-%20Track%206.mp3 song share lite par tal .. listen kyi kya par
22 Aug 07, 21:28Phoe Thar: not really, you need to haveapermit,
22 Aug 07, 21:27ုkoyinaaw: http://maynyane.cbox.ws/ မှာလည်း ကိုနီသစ်လို အကြံတူတွေရှိတယ်
22 Aug 07, 21:27myoag: is that legal for people to gather and protest peacefully in sg?
22 Aug 07, 21:27Zest;: I can't participate, but I wish to brave like all of you.
22 Aug 07, 21:26'DD': ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကို အားပေးပါတယ်။ (...သတိတော့ထားကြဗျာ...။ သူတို့က သိတ်ယုတ်မာကောက်ကျစ်တယ်ဗျ..)
22 Aug 07, 21:25Phoe Thar: Thanks myoag
22 Aug 07, 21:25myoag: >>>Phoe Thar.....Ko Htin Kyaw was arrested yesterday
22 Aug 07, 21:24martyr: nout par tway kyar tay lal byar ?
22 Aug 07, 21:23meemee: tajctaeawmfawmfqdk;aevm;
22 Aug 07, 21:21Phoe Thar: What I know is the demonstration was called by Ko Htin Kyaw, where is he? got arrested?
22 Aug 07, 21:17naychi_thit: thx ko yinaww , friend 1 yout ka ti chin lo par
22 Aug 07, 21:16thaethae1@: him? nar ka ku home mar.
22 Aug 07, 21:16ုkoyinaaw: ၅နာရီလို့ ကြားပါတယ် ...
22 Aug 07, 21:16naychi_thit: SG ka mm embassy shay ka bal time sa kya hmar lal ??
22 Aug 07, 21:15yangon: kyar lo bya. ma tay char woo
22 Aug 07, 21:15thaethae1@: bar twe phit nay kya pi lae?
22 Aug 07, 21:14myoag: is the message confirmed that we will gather and protest in front of myanmar embassy in sg?
22 Aug 07, 21:14naychi_thit: bal GTC ka kyoung tar tway ko phan tar lal??
22 Aug 07, 21:13thaethae1@: how to go .................
22 Aug 07, 21:12min_koko: i want to participate
22 Aug 07, 21:11min_koko: what about in bangkok?
22 Aug 07, 21:11yangon: gtc ka kyong tar tway phan khan ya tal so hotelar?
22 Aug 07, 21:10ုkoyinaaw: မနေ့ကဆို အိမ်ထဲတောင် လိုက်ဖမ်းနေတာဗျ
22 Aug 07, 21:09arrluu: bar tawe phit kone pi tone ?
22 Aug 07, 21:09naychi_thit: BBC online hmar tot news ma tway thay par bu ... TV channel ka pya thwer tar par .. news apyai asone ko wait nay par tal
22 Aug 07, 21:47ကိုဈာန်: ကိုဌေးကြွယ်လည်း အသံမကြားရသေးဘူး၊
22 Aug 07, 21:47Moe: http://www.mizzimaburmese.com/breaking_news.php
22 Aug 07, 21:47friend31: ကျေးဇူးပါ Empress ရေ
22 Aug 07, 21:47Moe: mizzima
22 Aug 07, 21:46Moe: နေ့ခင်း ၁ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးရှေ့တွင် ထောင်ဝတ်စုံဖြင့် တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူ ဦးအုန်းသန်းကို ရဲများက ဖမ်းဆီး သွားခဲ့သည်။
22 Aug 07, 21:45Moe: လုပ်ပါအုံ ကိုဈာန် ဒီဘလော့တွေကိုပဲ အားကိုးပြီး သတင်းစောင့်နေရတာ
22 Aug 07, 21:45Empress: ကိုထင်ကျော် အသံပျောက်နေတယ်နော်
22 Aug 07, 21:45ကိုဈာန်: သတင်းဌာနတွေကို လိုက်မွှေလိုက်အုံးမယ်...
22 Aug 07, 21:45Moe: သတင်းထူးကိုစောင့်နေတယ်
22 Aug 07, 21:45Empress: အခြေအနေကတော့ အေးနေတယ်တဲ့
22 Aug 07, 21:44Empress: စစ်သားတွေတော့ အများကြီးပဲတဲ့
22 Aug 07, 21:44Empress: မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ပွဲက အခုထိ လူစုကြီးမဖြစ်လာသေးဘူးလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်
22 Aug 07, 21:43ကိုဈာန်: သတင်းထူးရင်ပြောမယ်ဗျို့...
22 Aug 07, 21:42moehlahla: mm
22 Aug 07, 21:36သြဂုတ်မိုး: source AP
22 Aug 07, 21:36သြဂုတ်မိုး: (YANGON, Myanmar) — Defiant pro-democracy activists took to the streets Thursday for the third time this week to protest the military junta's imposition of fuel price hikes despite the earlier arrest.
22 Aug 07, 21:36Thi Ha: Are you sure xero , i mean your message because of i as k you , i am delievering this new to public to stimulate and arouse the desire of them .
22 Aug 07, 21:34Thi Ha: Everybody, can you get the news riot of Yangon?
22 Aug 07, 21:34xero: စံပြဈေးရှေ့မှာတော့ မနက်က လူ ၂၀၀ လောက်တန်းစီပြီး လျှောက်သွားတယ်တဲ့
22 Aug 07, 21:34Smilemay: ကြိုးဖုန်းတော ရနေပါသေးတယ် ဟန်းဖုန်းတော့ သိဘူး
22 Aug 07, 21:34GundamX: Actually "a way yaut" people could have done much better throughout the years, if they really want to....Anyway hope this chaos leads to something revolutional
22 Aug 07, 21:33ကိုဈာန်: ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြတ်နေတယ်....
22 Aug 07, 21:32brighten_star: http://www.irrawaddy.org/headlines/BurmaProtests-Continue.php
22 Aug 07, 21:30friend31: ဆူးလေမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ
22 Aug 07, 21:30ကိုဈာန်: ကိုအိတ်စပတ်စ်ရေ လုပ်ပါအုံး နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနက ဗမာသတင်းလေး....
22 Aug 07, 21:29'DD': ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကို အားပေးပါတယ်။ (...သတိတော့ထားကြဗျာ...။ သူတို့က သိတ်ယုတ်မာကောက်ကျစ်တယ်ဗျ..)
22 Aug 07, 21:29aaa: what's happening in Sule rite now ? any updates ? pleaseeeee
22 Aug 07, 21:28koyinaaw: http://maynyane.cbox.ws/ မှာလည်း ကိုနီသစ်လို အကြံတူတွေရှိတယ်
22 Aug 07, 21:27NiThit: ခင်ဗျား တို့ လဲ idea ရှရင် လုပ် ကြ ပါ။ Ukraine orange revolution မှာလည်း bloger တွေ အမှားကြီးလုပ်သွားတာ
22 Aug 07, 21:27ကိုဈာန်: ကိုဂျင်မီ.. လိုင်းပေါ်မှာရှိသေးလား
22 Aug 07, 21:25ruby: whats happening in SuLe right now?
22 Aug 07, 21:25koyinaaw: NiThit လုပ်ဗျာ ။ အတိအကျ သတင်းလည်း ထပ်ပေးဦး
22 Aug 07, 21:23အမျိုးချစ်သူ: ကောင်းတယ် အားပေးတယ် လုပ် ကြမယ် ကို နီသစ်ရေ
22 Aug 07, 21:22ကိုဈာန်: ကိုနီသစ်ရေ... သတင်းကြားရတာ ၀မ်းမြောက်စရာပဲ ခင်ဗျ၊
22 Aug 07, 21:20NiThit: ကျွန်တော်တို့on line bloger revolution guide line လုပ်ဖို့တိုင်ပင်နေပါတယ်
22 Aug 07, 21:19Avril: 1:52 PM ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများအပါအ၀င် မင်းဘူး ရေနံမြေ အလုပ်သမားများ အားလုံး မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ အပြင်မထွက်ကြရန် ယမန်နေ့ကတည်းက ကာဖျူးအမိန့် ထုတ်ထားသည်။
22 Aug 07, 21:18စိတ်ဓါတ်: ကြားရင် ချက်ချင်းတင်ပေးမှာပါ။ အခုက တကယ်ကော ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေရဲ့လား (အရင်သတင်းများမပါ၊ လက်တလောကိုဆိုလိုသည်) စဉ်းစားစရာပဲ
22 Aug 07, 21:18ကိုဈာန်: ကျနော်ကတော့ ကိုစိတ်ဓါတ်ပြောတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့လည် ခင်ဗျားတို့နဲ့ အနီးကပ်ရှိပါတယ်။
22 Aug 07, 21:18xero: ကျွန်တော်တို.တွေ လုပ်ရဲတယ် မလုပ်ရဲဖူးငြင်းရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူး။ i'm proud of u bro
22 Aug 07, 21:18NiThit: online ကလည်း လုပ် လို့ရတဲ့ နည်း တွေ ရှျိါတယ်။ ပတ်ဝန်ကျင်ကိုထပ်ဆင့် နိုးဆွုပေးပေါ့
22 Aug 07, 21:17စိတ်ဓါတ်: ဘာမှကို မကြားဖူးဗျို.
22 Aug 07, 21:16ကိုဈာန်: ကိုစိတ်ဓါတ် ခင်ဗျား... ကျနော်တို့ ပြည်တွင်း ဘက် ပြန်လှည့်ကြမယ် ခင်ဗျ..
22 Aug 07, 21:16စိတ်ဓါတ်: ကျွန်တော်တို.တွေ လုပ်ရဲတယ် မလုပ်ရဲဖူးငြင်းရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူး။ အဝေးရောက်နေသူတွေမှာ လုပ်ရဲရင်တောင်လုပ်လို.မရတော့ဘူး။ ဒီတော့ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အားပေးပါ။
22 Aug 07, 21:15koyinaaw: friend31 အပြင်မှာလည်း ဆိုင်းပြင်းနေကြပါပြီ ... ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် စင်ကာပူ ၊ မနက်ဖြန် မလေးရှား ... ဆန္ဒပြကြမယ်
22 Aug 07, 21:15ကိုဈာန်: အဲဒီလို့ ကျနော်တို့ ယူဆလို့ မရဘူးထင်ပါတယ် ကိုဖရမ့်၃၁ ခင်ဗျား... ကျနော့်တို့ နိုင်ငံအရေး...က တမျိုးသားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်သလို၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လည်း ကမ္ဘာကို ပြန်ဖြန့် နိုင်တာပေါ့
22 Aug 07, 21:15Empress: Friend31 > ဒို့တွေ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတုန်းက ဘာမှ မဖြစ်တော့ အခုအဝေးရောက်ချိန်မှာ အွန်လိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ရတော့တာပေါ့
22 Aug 07, 21:13friend31: တိုင်းပြည်အရေးကို ငါတို့ အဝေးကဘဲ ထိုင်ကြည့်နေရမှာလား ငါဟာ online ပေါ်မှာသာ ရဲရင့်တယ်
22 Aug 07, 21:12koyinaaw: ဟဲဟဲ ... ခါးပိုက်ထဲက သူတွေဘဲ ကိုင်နိုင်တာ များတယ်လို့ ...
22 Aug 07, 21:11JulyDream: ဆီးဈေး ပြန်မချပါဘူး ခင်ဗျာ။ သေချာပါတယ်။
22 Aug 07, 21:10Moe: အစိုးရမှာ ဒီလိုစိတ်ကောင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူး
22 Aug 07, 21:10Moe: ဆီဈေးချတာမဖြစ်နိုင်ဘူး
22 Aug 07, 21:09အမျိုးချစ်သူ: ခါးပိုက်ထဲမှာများ တယ် ဆိုတာ ဘာလဲဟင် ကင်မရာလား koyinaaw?
22 Aug 07, 21:07koyinaaw: အမျိုးချစ်သူရေ .... ခါးပိုက်ထဲမှာ များတယ်ဗျ
22 Aug 07, 21:07Empress: ပီတီ ကေ၇းထားတာတွေ့ လို့ ပြောတာပါ ၃၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ ပြန်ချပေးတယ်တဲ့
22 Aug 07, 21:06သြဂုတ်မိုး: Pro-democracy activists in Burma's main city, Rangoon, have taken part inathird demonstration against the recent sharp rise in the price of fuel. BBC
22 Aug 07, 21:06စိတ်ဓါတ်: ဘုရင်မရေ.. ဘယ်မှာချပေးလို.တုန်း
22 Aug 07, 21:05NiThit: now u ohn than was arrested
22 Aug 07, 21:05Empress: ဆီဈေးပြန်ချပေးပြီး ချွေးသိပ်တဲ့သဘောလား
22 Aug 07, 21:05PT: i will confirm to y later
22 Aug 07, 21:05အမျိုးချစ်သူ: အခုခောတ်ကတော့ လူတိုင်းက မီဒီယာကို မျှော်လင့်အားကိုး ရင်းနှီးနေကြပြီလေ
22 Aug 07, 21:05k2chit: I remember our Father Aung San .
22 Aug 07, 21:04အမျိုးချစ်သူ: ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအစတုန်းက လူတွေက ကင်မရာမင်းဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်။ သူလျှိုထင်တယ် ထောက်လှမ်းရေးထင်ပြီး ကင်မရာသိမ်းတာတို့ ဘာတို့ရှိခဲ့ဖူးတယ်
22 Aug 07, 21:04စိတ်ဓါတ်: အမျိုးချစ်သူရေ အဲဒီ့ဟာတွေသုံးနိုင်သူတွေ မြန်မာပြည်မှာရှားတယ်ဗျ
22 Aug 07, 21:04Thi Ha: Dear everybody , send the message to the internet because we are collecting the news to deliever to public to at Thailand to interest the news and participate this riot and demonstration.
22 Aug 07, 21:04Avril: http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/295554/1/.html
22 Aug 07, 21:04PT: i heard aboiut govt fuel price drop 3000 to 1500 starting from 12 noon today
22 Aug 07, 21:04အမျိုးချစ်သူ: ပြီးတော့ ဟင်းဖုန်းကင်မရာကနေ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနဲ့အသံဖမ်းတဲ့ mp3 တို့ mp4တို့ ပေါလွန်းလို့ 
22 Aug 07, 21:03xero: 1:52 AM ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများအပါအ၀င် မင်းဘူး ရေနံမြေ အလုပ်သမားများ အားလုံး မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ အပြင်မထွက်ကြရန် ယမန်နေ့ကတည်းက ကာဖျူးအမိန့် ထုတ်ထားသည်။
22 Aug 07, 21:03အမျိုးချစ်သူ: ၈၈၈၈ တုန်းက နိုင်ငံတကာက အခုလို စကန့်မလပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ ပြည်တွင်းကနေ စကန့်မလပ် မျက်မြင်သတင်းတင်ပြနေဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ အခုတော့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွက ပြည်သူစစ်စစ် ပြည်သူ့ ဖက်တော်သားတွေအများစုလေဗျ
22 Aug 07, 21:01ကိုဈာန်: ကိုစိတ်ဓါတ်ရေ.... သတင်းလေးတွေ လုပ်ပါဦး...
22 Aug 07, 21:01ပူတူတူလေး: မာရှယ်လောကဆိုတာ ဘာလဲ ၊
22 Aug 07, 21:01ကိုဈာန်: အဓိကကတော့ ၈၈၈၈ ကလို နအဖ က ၀င်ပြီး အရေးတော်ပုံကို သရုပ်ဖျက်တာ မခံရဖို့ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် လူထုမှာတော့ ၈၈၈၈ က အတွေ့အကြုံ ရပြီးသားပါ ခင်ဗျ
22 Aug 07, 21:01Empress: မမေငြိမ်း ဘလော့ဂ်ထဲမှာ သစ်စာဆိုထားတာ၇ှိတယ် အဲဒါကိုပဲ တစ်နေ့ အခါတစ်၇ာလောက်ဆိုနေပြီး ဆုတောင်းပေးတော့မယ်
22 Aug 07, 21:00ruby: what do u mean by "Hledan is blocked?" People from hledan r coming. 22 Aug 07, 20:59ဘကောင်း: မာရှယ်လောကရေနံချောင်းမှာ ထုတ်ခဲ့တာဘဲဗျ.
22 Aug 07, 20:59အမျိုးချစ်သူ: ၈၈၈၈ တုန်းကလဲ တီအီး11 စစ်ကားကြိးတွေ သံဆူးကြိုးကြီးတွေ G4 သေနတ်ကြီးကားအမိုးပေါ်ထောင်လို့ ဒီလိုပဲ ဟိုပိတ်ဒီပိတ်စောင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊
22 Aug 07, 20:58ပူတူတူလေး: သီတင်းအသစ်ဘာရသေးလဲ ?
22 Aug 07, 20:58ကိုဈာန်: ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုဘက်က ၆၀ ရာခိုင်းနှုန်းလောက် ပိုစဉ်းစားထားရင် ကောင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊
22 Aug 07, 20:58ပူတူတူလေး: ဘာသီတင်းရလဲ
22 Aug 07, 20:58NiThit: Ohn Than is now launchngasolo protest in front of US embassy in Rgn
22 Aug 07, 20:57Empress: ကိုဈာန်ေ၇ ဒီတစ်ခါတော့ ပါးနပ်စွာကိုင်တွယ်မှပဲ ဒီခွေးမျိုးပြုတ်မှာ
22 Aug 07, 20:57Di Nyein: .
22 Aug 07, 20:57xero: လှည်းတန်းကို ပိတ်ထားတယ်လို. ရန်ကုန်မှသိရပါတယ်
22 Aug 07, 20:57အမျိုးချစ်သူ: ပြောပြီးပကိုး သူတို့ ဘ၀က ကျားပေါ်တက်စိးမိပြီးကျားဖင်ဟိုဒင်းမိတဲ့ခွေးဘ၀လေ
22 Aug 07, 20:57အမျိုးချစ်သူ: သေမထူးနေမထူးကတော့လုပ်မှာသေချာတယ်။ အခုလဲလုပ်နေတာပဲဟာကို 22 Aug 07, 20:56အမျိုးချစ်သူ: ဒီတခါတော့ ဒုံရင်းဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်
22 Aug 07, 20:56ကိုဈာန်: ကျနော်စိတ်ပူတာ တခုပဲရှိပါတယ် ခင်ဗျ၊ နအဖက သေမထူး နေမထူး လုပ်မှာကိုပါပဲ၊
22 Aug 07, 20:55Empress: ဒီခွေးတွေ လုပ်နေကျ အကွက်ဆင်တာကို စိတ်ပူလို့ပါ ကိုစိတ်ဓါတ်ရယ် အခုလုပ်နေတဲ့သူတွေကို အရမ်းချီးကျူးတယ် အားလဲပေးတယ် ဒါပေမယ့် အသက်တွေထပ်စတေးပြီး ဒုံရင်းကြီးပဲဖြစ်မှာကို အရမ်းစိတ်ပူနေမိပါတယ်
22 Aug 07, 20:55ကိုဈာန်: ကျနော်ထင်တာက ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထု နဲ့ အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ၈၈၈၈ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ပါခင်ဗျ၊
22 Aug 07, 20:55Di Nyein: .
22 Aug 07, 20:55အမျိုးချစ်သူ: သက်တမ်းဆက်ဖို့ လုပ်ကြည် ပေါ့။ ကျားကိုတက်ခွယုံမ ကဘူး ကျားဖင်ကိုပါ ဟိုဒင်းလုပ်ထားတဲ့ခွေးဘ၀ ။ ဆင်းလဲမဆင်းရဲဘူး
22 Aug 07, 20:53အမျိုးချစ်သူ: ဆက်ကြည့်လေ။ လုပ်ကြည့်။
22 Aug 07, 20:53စိတ်ဓါတ်: ဘုရင်မရေ ... အဲလိုလုပ်ချင်ရင် ခေါင်းဆောင်တွေ လွှပေးမှာပေါ့။
22 Aug 07, 20:52အမျိုးချစ်သူ: သက်တမ်းဆက်ဖို့ ကိစ လား။ သေချာတာပေါ့
22 Aug 07, 20:52hi: GTC ka i fri twe pyaw tal
Posted by Peaceful Walking at 4:56 PM0comments